Ubuntu uye Windows 7 Ubuntu iri nani here? | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu uye Windows 7 Ubuntu iri nani here?
Ehe, hongu, Ubuntu ingangove isiri yepamusoro kune Windows 7 sezvataifunga. Tichaongorora izvo zvakaitika mune yekudzidzira kudzidza kwe TuxRadar, mhedzisiro yacho inodarika kunakidza uye haina kunyatsooneka. Ndiyo kurwa pakati peUbuntu neWindows 7 kutsanangura kuti ndiani akanakisa.
Kana iwe uchida kuona iyo yekutanga chinyorwa uye kutora mukana wekutarisa pane yega girafu, verenga chinyorwa chine mhedzisiro.
Ubuntu vhezheni 8.10 uye 9.04 dzinoongororwa imwe neimwe pa x86 uye x86-64, pamwe neWindows Vista pane ese mavhezheni futi uye Windows 7 pane ese mavhezheni.
Kana iri yekuisa, Ubuntu mune dzese vhezheni dzinotsvaira nehurefu hwe Kuiswa kwemaminetsi gumi nemashanu pane 15-bit Ubuntu 8.10, kusiyana ne 23 maminitsi izvo zvinogona kutora Windows 7. Mukudzvanya kwakakodzera zvakafanana, muWindows 7 iwe unofanirwa kuita 14 kudzvanya, muUbuntu 8.10 chete 7.
Uye maererano nediski nzvimbo yakashandiswa, hukama hwacho hwakasiyana zvakanyanya, nepo muUbuntu iwe unoda 2.3 GB mune angangoita ese mavhezheni ayo, muWindows huwandu hwacho hwakanyanya kukwirisa: 64-bit Windows Vista inoda 11.9 GB uye 7-bit Windows 32 chete 7.9, asi hama yayo 64-bit inoda 11 GB.
Kubva uye mberi:
Hechino chinhu chinonakidza, chinhu chakakosha kutevedzera maitiro edu, uye kana ichikurumidza kana kwete.
Nguva dzakatowanda zvekuti daro rakakura pakati peOS imwe neimwe riri pakati peWindows mbiri:
Iyo 7-bit 32 inotora 59.8 masekondi uye iyo 7-bit 64 inotora 75 masekondi. Iyo ubuntus Vanoenda pakati pemasekonzi makumi matanhatu nemasere kusvika makumi manomwe nenomwe. Hazvimiriri zvachose.
Mukudzima kana mutsauko unoonekwa ukaonekwa: Ubuntu 8.10 32-bit inotora masekondi 8.5 kuti ivhare, Windows Vista inotora 25.9 uye Windows 7 inowana mhedzisiro yepakati: Mune yayo 64-bit vhezheni inotora masekondi 14.3 uye mune iyo 32 vhezheni inotora 13.4 masekonzi.
Tichaona mienzaniso yakati wandei:
Ngatitii tine gwaro reHofisi, chero .ODT uye tinoda kuchinjisa kubva pendrive yedu kuenda kumuchina wedu, izvi ndizvo zvavaida kuratidza muTux Radar, saka kutora nguva yavakashandisa hombe ZIP faira ine yakawanda mafaera. zvidiki izvo zvavakaburitsa pane rakaomarara dhiraivha.
Mumafaira madiki Ubuntu anomira, iyo inotora zvishoma ndeye 8.10-yechipiri Ubuntu 27.7 kuendesa, mukushanda kumwe chete Windows 7 32-bit inotora masekondi 74.8.
Iye zvino kana isu tikachinjisa iwo mamwe mafaera mukati meiyo yakafanana dhiraidhi, semuenzaniso, kana isu tichirodha pasi ZIP:
Ese ma OS anozvibata zvakaenzana kunze kweWindows 7 yekureva: Ubuntu 8.10 inotora 11.3 mune faira famba uko 7-bit Windows 32 inotora 89.8 masekondi.
Zvekare mafaera kubva pendrive, asi mahombe mafaera, zvinhu zvakabatanidzwa:
Ubuntu 8.10 32-bit inotora 17.9 seconds y Windows 7 19.6 masekonzi (64-bit vhezheni inotora nguva yakati rebei)
Ino nguva mukati medhi hard drive, kuhwina Windows 7:
Ipo 8.10-bit Ubuntu 32 (iyo inomhanyisa ubuntus) inotora 6.2 masekondi, 7-bit Windows 32 inotora 5.9 masekondi, uye iyo 64-bit vhezheni inotora 6.1 masekondi, haisi kurova kana asi kukunda.
Muedzo wekupedzisira wemasikati:
Yekupedzisira chinangwa chinokunda Wokupedzisira bvunzo yaive yekumhanyisa script uye kuona kuti ndeipi system yaiita kuti imhanye nekukurumidza.
Sezvo makumi matatu nematatu masisitimu akasiyana nema 32-bit masisitimu, ngatitarisei kwavari zvakasiyana:
32: Ino nguva Windows 7 inokunda, kuve nekukwanisa kumhanyisa script mumasekondi 410.9 kupesana neiyo 464.46 yakatorwa naUbuntu 8.10, izvi ndinofunga kurova.
64: Guess ndiani akahwina… Ubun… Windows 7 zvakare, panguva ino, kwete nekureba, zvakangotora 374 masekondi kurwisa Ubuntu 387's 8.10, ehe, Ubuntu 9.04 (beta) yave kuda kusvika 375 masekondi.
Chenjera kuti bvunzo yekuita chete yakaitwa pano, asi zvinotaurwa nenhamba ndezvekuti Windows 7 iri nani zvakanyanya kupfuura zvataitarisira uye kuti, dai asiri mavhairasi uye mhando yechinhu ichocho, ingadai iri imwe nzira yeUbuntu. Iko hakuna muhwina muhombe mujaho uyu, asi Windows 7 yakazviratidza pachayo kusimuka kune chiitiko.
Ubuntu zvirokwazvo haikunde uyu mutambo.
Mufananidzo wacho unobva Kevin steele Hongu Creative Commons
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Ubuntu uye Windows 7 Ubuntu iri nani here?
Ikozvino ndipo patinotarisa mutsauko wemutengo weimwe neumwe uye hapana kana akajeka anokunda.
Pasina kuverenga mutengo Ubuntu anokunda mune angangoita bvunzo.
chinyorwa chakanaka kwazvo, mamwe mairafu ekufananidza kumagumo nedhata angadai akave "matsvene". Asi zvakanaka chaizvo zvakadaro.
'Windows 7 imwe nzira yeUbuntu'… inonakidza. Inonakidza kwazvo.
Uye havana kuedza mamwe ma distros? Zvingave zvakanaka kuti usabatike paUbuntu chete, kana zvisiri kuona MOST dzedzimwe nzira ...
Pamwe mamwe ma distros akaita saDebian, Fedora, Gentoo kana OpenSUSE achadaro.
Ah linuxers, ivo havazombofa vakadzidza!
Iyi bvunzo haina kunakidza (kunze kwekunge yanga yakanangwa kumaseva), wadii usability miedzo? Kwavanoyedza kana vashandisi vakwanisa kumisikidza USB, semuenzaniso. Kana ivo vanokwanisa kuwana nekuisa chikumbiro zvinoenderana nechimwe chinodiwa, kugadzirisa dambudziko (sekutumira email kuburikidza neEvolution kana Windows Mail) kana kuita akateedzana masisitimu (imba yemumba). Aya maedzo anonyanya kugutsa, nekuti iwo anoratidza kurerukirwa kwekushandisa software uye kugadzirisa dambudziko kune rakanangana nevateereri (mushandisi wedesktop).
chaiko 7 haina kundishamisa zvachose, asi zvinoita senge kwandiri imwe kopi yekutarisa kunze kwebara rebasa, risingounze chero chinhu chinobatsira uye mushure mezvose zvinodiwa zvicharamba zvakafanana nekutarisa, nenzira iyi zvichanetsa kuona kufa ku xp
Zvakanaka uye ini handisi kuti iri kudzivirira Windows zvachose, ndinozvitaura kuitira kuti kana vakomana vezvinyorwa vachiona izvi vaise mabhatiri uye izvi zvese zvichasimukira zvakanyanya uye zviri nani kupfuura mabudiro ekuvandudza muLinux, kunyanya muUbuntu vakapfupika. uye zvakanaka zvatsanangurwa, ivo vacharwisa avo vasina kusimba mapoini kutarisana naWin7, zvese izvi zvichaunza mabhenefiti kune vese GNU / Linux uye Win7 vashandisi, kwaziso
Pindura Miguel Gastélum
Zvinoenderana ne bachi.tux nekuti bvunzo idzi dzinoitwa nemamwe ma distros senge mandriva, suse, nezvimwe…. inogara iri ubuntu, ichive kuti ndeimwe yeanonyanyisa kuita
@Ricardo: Kubva pane zvinotaurwa nemuedzo, ivo havana kufanana zvakanyanya.
@Edwin @ bachi.tux uyu bvunzo unoitwa neUbuntu nekuti Ubuntu ndiyo bhenji, iyo ine vashandisi vazhinji, kwete nekuti haina kunaka kana kuenzana neLinux. Handifunge kuti Tux Radar inoda kukwira iyo yakaenzana.
Zvikasadaro kuita kuenzanisa nema distros akati wandei kungave kuri chunk. (Muiyi enzaniso 8 OS 4 Ubuntus (yazvino uye beta) uye 4 Windows (yazvino Vista uye beta 7) yakaongororwa)
Zvakanaka, zvinoenderana nekuti masisitimu akagadziriswa sei
Ini ndinofanira kubhuna ubuntu nekukurumidza semasekondi gumi nemanomwe (kubva pagirubhi screen kusvikira ndasimudza iyo GDM) uye komputa yangu haisi ndege (dzaive s17 754 ine 3000 × 2 DDR512 400-2-3-3)
Kana ndikagumisa X, yakatanga muna 14: p
Zvinosuruvarisa, ndakarasa kernel yandakanga ndanyora kuitira kuti ibhure izvo nekukurumidza :(
Mune chimwe chikamu, ndinobvumirana zvizere naFran muchikamu chemutengo pamwe nemuyedzo yekushandisa yakataurwa naBete Corrupto
@kernel_panic: Yaaaaaa asi iyo tambo yakanyatsonaka, mushandisi weUbuntu haatenderi achidzokorora kernel.
"Dai zvisiri zvehutachiona uye izvo mhando yechinhu" ... haha
Miguel Leal akadaro
mmm .. inguva dzekuhwina idzi dzichaenderera mberi kuva dzakanaka mushure memwedzi 1, 2 kana 3 yekushandisa? Handitendi mazviri
wow ... kuwanikwa kukuru ... muongorori anononoka ??? kwete kwandiri, asi inoyamwa. Mukuita zvinhu zvinhu hazvingambokonzeresa kuti bhalanzi itike nenzira imwe kana imwe. Chii chinoita kuti ubuntu nemamwe akawanda linux distros ari pasi pechinhu chimwe chete, icho che "linux zvishoma zvakapusa", usanyatsomira chaizvo kumhanya .. nautilus dzimwe nguva zvinonditorera masekondi mashoma kuti ndivhure, uye ndinofunga Ndo inononoka kupfuura Explorer, asi inowana yakawanda mukuchengeteka, kugadzirisa, sarudzo, maturusi, nezvimwe. Uye tisingataure nezve KDE4, dai zvisiri izvo zvekuti kumonyoroka kwayo kusingandibvumidze, chingave chandinofarira pane dzakasiyana sarudzo. Ubuntu mune ino kesi ndiye anokunda wekusununguka (mune dzidziso), uye neizvo zvatova kurova zvine mutsindo. Kana zviri zvekuita, zvirinani kushandisa Puppy Linux.
Lastma kuti ndiri kushaiwa antivirus, antispywire, uye iyo isinganzwisisike hutachiona iyo yakakandwa pandakatanga Windows .. Ikoko taizoona mutsauko.
Uye nenzira, Ubuntu (uye linux) kutyora Windows mukushandisa diski, sezvo vachizoda 7 GB CHETE kune iyo OS !!! Uye chii chakaitika kuchirongwa chekugadzirisa mifananidzo, rekodhi dhisiki, chirongwa chekutumira mameseji uye Hofisi Suite ??? Ubuntu uye mamwe ma distros ane zvese izvi mu4GB chete
Izvo zvinofanirwawo kuyeukwa kuti nekufamba kwenguva uye mushure mekuisa zvirongwa zvakawanda, Windows inotora nguva yakareba uye yakareba kuti itange, nepo Ubuntu uye chero GNU / Linux distro inogara yakatsiga mune izvo.
Ini ndinobatana nemaonero aMartín, nekuwedzera nzvimbo inogara chero Windows isina "zvakajairika" zvinoshandiswa zvekushandisa PC yakajairika, nepo Ubuntu, semuenzaniso, painopedzwa kuiisa inenge yatove kushanda zvizere. Kiyi paruoko ;-)
Chokwadi ndechekuti mumuchina wangu ndine Ubuntu 7.10 uye Windows XP. PAMUShini wangu, XP inoshanda, asi inononoka kwazvo dzimwe nguva. Ubuntu haisi mwenje chero, asi kunyangwe iine Active Compiz pane yekare bhodhi (GeForce2MX) inoratidza mhedzisiro uye inondibvumidza kuti ndishande pasina matambudziko akakura.
XP inopunzika nguva dzese uye Ubuntu iri kubhengi yakareba uye yakaoma. Ndine urombo kushandisa XP kazhinji zvakanyanya kunaka, ndizvo zvazviri.
@darkhole: Kukupa zano:
Hofisi = 3GB
Windows Live Mutumwa = 30MB
saka kuwedzera 7,3 + 2,9 + 6,2 + 3 + 0,3 = 19,7GB
ese maonero uye manomwe anoitwa kuti amhanye pamashini nyowani, chero distro kubva 7-2008 inogona kumhanya pamashini ane makore mashoma
Zvinoenda!… Ivo vakangoedza ubuntu, zvakadii nezvevanhu distros senge archlinux uye debian?
Kunyangwe iko kuita kwacho kuchienzaniswa, chinhu chakakosha nezve Linux ndechekuti iri GNU. Zvekuita kumwe chete, asi zvese zvemahara, zvakachengeteka uye zvinofambira mberi nekukurumidza, unogara nei?
Zvinoita kunge zvakapusa kwandiri kuti vanhu veTux Radar (TUX !!!) havana kufunga nezvezvinhu zvataurwa pano kuti vaite fananidzo yakavimbika ... vanoita seni kwandiri seveveAnti-Ubuntu ...
Dark Knight akadaro
Usavhiringidze! Aya bvunzo dzekuita hazvisi zvese zvekutaura kuti Win2 7 iri nani pane Ubuntu uye mune inonyanya kukosha ndinotenda kuti Ubuntu inoramba ichikunda. Ini handifunge kuti ndizvo kana zvakafanira kuzvifunga munguva inotevera. Vashandisi veGNU + Linux vanonyatsoziva zvakanakira pamusoro pemamwe masisitimu anoshanda, ayo akati wandei uye akakosha kwazvo. Kutumidza mashoma: hapana mavhairasi, mashandiro akanaka panguva yekushandisa, kushomeka kwekutarisira uye kutarisirwa kwesystem, diki diski nzvimbo yekushandisa uye system (sekutaurwa kwazvakaitwa mune aya makomendi), usanyorere vatsoropodzi, pakati pevamwe vakati wandei.
Pindura kune Rima Knight
vangadai vakaedza debian …………… ..
Pindura kumumvuri werima
Zvinonakidza sei, maTroll anoshandukawo uye haufanire kuedza kuvaziva, ivo vanongo shurikidzwa se troll xD, ndinofunga zvakanaka, chengetedza iyo Troll: D, uchaenda kure
Ubuntu kuri fuck shit.
Zvinoshamisika kuti yero yero yero sei, chaizvo ivo vanokurudzira iyo linux vs windows hondo kuunza kushanya kwakawanda uye kubhadharisa adsesnse
poindi ndeyekuti ubuntu hwakakwana uye hunenge hwamwari, chero munhu anoti neimwe nzira ndeyegodo troll.
chii chisingashanduke chiri ubuntu Dx
vhezheni 8. * ingangoita njodzi uye chinhu chakanyanya kuipa ndechekuti pane fan yakawandisa iri kurisimudzira pane kuigadzirisa
@Troll: Noooo, haasi troll ane godo, iye ndi zvinosiririsa. Ah uye Ubuntu haina kuita kunge yeumwari, ndeyemwari.
Ongororo yako inoita kunge inopenya kwandiri.
Windows Vista yaive beta yeWindows 7, saka panguva ino tichava nezviri kunetsa kuti vanhu vachinje.
Isu tinofanirwa kutora mukana kusvika zuva rekupedzisira renguva yeVista !!
zvinoenderana nezvandichangobva kuverenga Ubuntu anorova windows 7 nekure
Sezvavanotaura, izvi zviverengero zvemaseva, asi ini semushandisi wekupedzisira zvinonditsamwisa kuti zuva rega rega ini ndinotanga XP yangu nguva dzese painotora nguva yakareba kuti ndisvike paLogin screen, ipapo kubva ipapo kusvika yagadzikana inonetsa, uye kuti Izvo zvakawanda zvirongwa zvinotanga zvega zvinogumiswa. uye ini handina muchina wekare kudaro (ndinofunga) Centrino ane 1.26 muRam…. uye kunyangwe zvakadaro ... ndinosarudza XP kuenda kuVista, ikozvino zvakanaka ... kana isu tato taura nezvekuchinja iyo OS, Ubuntu ndinayo pakombuta yangu yekumba, uye ndinosarudza Ubuntu nekuti zviri nyore kuMushandisi Womugumo, zviri nyore kuisa zvirongwa, kumisikidza mhedzisiro, nezvimwe, nezvimwe ... zvakashata ndinofunga nezvevane moyo yeLuxeros vanofunga kuti isu tese tinoziva zvavanoziva uye zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kuisa chimwe chinhu nemirairo mitatu. ndosaka vachikumbira mamwe ma distros saDebian, ... kana pavanhu gumi gumi vari vashandisi vekupedzisira, zvinhu zvinofanirwa kuve nyore, ndosaka windows inotungamira, uye iyo chete iri kutsvaga kuti zvinhu zvive nyore kune End. Mushandisi Ubuntu ...
Webbeando uye ndichitsvaga info nezve ubuntu ini ndaona akawanda enzaniso ndinofungidzira ke akellos ke kutaura kuti ubuntu haishande zvichave nekuti ivo kedan mune monotony ye windows uye ivo havana kushandisa chero imwe OS yandakatoshanda ne linux uye zvaitaridzika kunge zvakanaka chose kunyangwe muKufananidza uku havaise iwo maratidziro emakina sezvo ari iwo rudzii rwe micro yakawanda sei gondohwe rudzii rweiyo mamaboard hard disk nezvimwewo ect
Muchidimbu, ini ndicha fomatiya yangu makina uye nekuisa xp uye ubuntu mairi kugadzira kaliz uye usandizivise kuti ndibvise kusahadzika ndega
AAAAHHHHHHHHHHH !!! Maziso angu anorwadza!
Handifunge kuti Windows 7 icharova GNU / Linux Ubuntu, ndinozvitaura nekuti vhezheni dzinotevera dzeUbuntu dzichakurumidza kuburitswa, saka zvakakurumidza kutaura kuti Windows 7 ichave nenguva dzakanaka kubvira GNU / Linux Ubuntu isingamire kugadzirisa uye kugadzirisa.
Windows 7 ichave nezvinodiwa zvakafanana neVista asi zvakare hazvisi izvo zvinoshanda nesisitimu yekushandisa chete asi zvakare ese mamwe mapurogiramu anodiwa kuti uve nekuchengeteka uye izvo zvinosanganisira antirivus antitrojan antispyware nezvimwe ...
Windows 7 haigone kuve yakanaka nekuti zvinoita sekunge chinhu chete chavakaita kuwedzera mamwe maesthetics uye mashandiro asi iwe unofanirwa kuona kuti zvinoshanda sei.
Ini ndinofunga GNU / Linux Ubuntu ichatungamira nekuda kwechikonzero chimwe chete icho ichigadziriswa mune shoma nguva uye kana Kushinga kwakanaka iri rinotevera rinenge riri nani kwazvo!
Pindura kuna sirlordaeron
Ummmm, inonakidza ... zvisinei, bvunzo iyi yakaitwa isina antivirus mune ese OS, handizvo here, mushure mekuwedzera antivirus, firewall, antispyware nevamwe kuWindows, iko kuita kuchadonha zvakanyanya muWin.
José, hapana chaunoita kunze kwekungopopota nezve Linux uye usape chero ruzivo nezve mapurogiramu awakaisa.
Nezvekuchengeta magwaro ako kwenguva yakareba, ingokuudza iwe kuti akawanda maseva anoshandisa GNU / Linux, uye izvo zvinodaro nekuti yakachengeteka uye inoshanda zvakanyanya kupfuura vamwe vakaita seWindows Server.
Ndokumbira upe mienzaniso, kwete kungoita rant pasina kutaura kuti ndeipi distro yawakashandisa, kana kuti ndeapi mapurogiramu awakashandisa.
Ndine shamwari dzinoverengeka dzandakaunza kuGNU / Linux uye vanofunga kuti zviri nyore kushandisa kupfuura Windows, zvirongwa zvakaiswa zvirinyore uye zvinowedzeredzwa kubva kumatura pasina kunetsekana nezvekuti zvakagadziridzwa here kana kwete. Iwe haudi anti-hutachiona, anti-spiware, kana chero chipi zvacho chekupenga kudzora komputa yako.
@Jose Nharo dzako ndedzechokwadi kuti haufarire kushandiswa kweGNU / Linux mapuratifomu kana pamwe Mahara Software, asi ini ndinofunga haunzwisise mamiriro ezvese izvi, pamwe kana iwe uchizopa zvakawanda pamusoro pekugovera kupi kwawakashandisa pane kwete ini unogona kufunga zvimwe kunze kweUbuntu, kana zvirizvo, ini handizive zvawaitarisira, zvinogona kuverenga pfungwa dzako, asi teerera rwiyo, iwe unongofanirwa kuisa pointer pamusoro payo kana kutovhura chirongwa, uye zvimwe zvese kana iwe unoti iwe wakashandisa Mahara Software pane XP, zvingangoita kuti chirongwa ichi chakatanga kuburitswa cheGNU / Linux.
Nezve izvo zvinogadzira, iwe wakanganisa, ivo vachangobva kuburitsa chinhu chenhau kubva kuFrench Police iyo yakachengetedza anopfuura mamirioni makumi mashanu euros nekushandiswa kweFree Operating Systems (ubuntu) uye Mahara Software kubvira 50 muchikamu chidiki kwazvo chese mapurisa, ndinofunga kuti kana iri bhenefiti mune Yechokwadi nharaunda, uye pamaseva vari pachokwadi iyo Apache server iri pasi peGNU / Linux chikuva uye ndiyo inonyanya kushandiswa pasi rese, yakachengeteka kupfuura iyi server kune iyo LAX iri uye chero WordPress blog Iri pasi peApache Server, hhaha kana iwe wakamboshandisa Wikipedia, shamwari iri Mahara Software.
Dambudziko chairo nderekuti kana iwe ukashandisa windows havatenderi iwe kuti uvhure ivo kuti vaone iyo inoshamisa nyika yeruzivo iyo iri kunze.
Ndiri mainjiniya ndinofunga xp yangu ine sevhisi pack 3 ndizvo zvese zvandinoda sekomputa chikuva, ndakaedza maBhaibheri maviri e linux uye nokutendeseka, linux shamwari hadzigumbuke asi kwaive kutambisa nguva, mumawindo kana ndichida kuita kudhirowa Nenyoro kadhi ndine zvakawanda zvingasarudzwa kubva pakubhadharwa kuenda mahara, zvakafanana nehofisi software uye ndisingataure nezve multimedia, kana ndichida kuteerera mp2 ndiyo yakapusa uye ndine zvakasarudzika zvezvisarudzo, ini ndinongoshandisa kune imwe kana iyo inoshanda uye yakagadzirira ndinonakidzwa nekushandisa uye mashandiro, muLinux unofanirwa kuve komputa psychopath kuti ugone kuita zvakapusa mabasa nyore, mumaonero angu chinhu chakakosha kushandisa sisitimu nenzira kwayo kune yakatarwa kushandiswa kwete kushandisa chiuru linux masystem, kuyedza iwo ese kwemakore muzviuru zveshanduro uye wozoita chimwe chinhu mushe, kuti kana iyo faira system, iyo kana inonyaradza, kuti kana iyo yemahara software inokwenenzvera, kuti kana iwo mapurogiramu 3, kupenga xp yangu inoita chii Ini ndinoda uye mushe, kuti kana iwo maonero akaremerwa ichokwadi chose, kuti yakagadziridzwa neyekutanga sevhisi pack zvakare asi ini handina kutanga kuishandisa, ndakaedza beta ye1000 uye ndakaifarira, maforamu ese taura kuti vachaita zvingangoita 7 kuvandudzwa, Kana zvabuda chichava bertia, ini ndakavimbisa kuti linux yakareruka, ndiregererei asi kunyangwe nzira yacho inoratidza iwo mavara anotaridzika kunge akareruka uye asina kunaka mushanduro mbiri dzandakaedza uye chimwe chinhu se yakapusa sekumisikidza flash memory mu linux yakanyanya kuomarara, zvekuti ndinozviita ichokwadi asi ipuratifomu inopokana, ndiregerere zvakare asi ndinofunga ndezvevanhu vanopenga vasina chimwe chekuita kunze kwekuyedza software vasina kuishandisa zvine mutsindo mukati mavo hupenyu, ziso rine zvibereko ini ndiri kutaura nezvazvo kurishandisa mune zvehunyanzvi kunyorera kusvika nyore varaidzo, sekungoteerera rwiyo zvakanaka, handivengi vanhu velinux zvachose asi ini ndakaedza mapuratifomu avo uye ivo vachiri kuita kunge vasina kuchenjera kwandiri, pfungwa yeiyo graphical mushandisi interface sekurangarira kwandinoita kubva kuzvidzidzo zvangu Chikoro chesekondari ndechekuita kuti hupenyu hurerukire mushandisi uye ndizvo izvo zvakanaka kukunda kana mac masisitimu anotarisana nazvo (ziso bofu haha) zvakanaka linux shamwari hadzigumbuke asi chinhu chega nezve linux ndechekuti mazhinji ayo distro akasununguka, asi Ndiwo munondo unocheka nekwose, ini handimbofa ndakachengeta mabhakitiriya edhisheni tenzi wangu mune chero linux yandisingazive kune chero munhu ane magwaro avo kwemakore muLinux, ivo vanongorasa ivo, ndinoda kukwegura ndoziva kuti mafaera angu anogona kubvunzwa zviri nyore, yekare rombo
@Jose Makadii, maswera sei? Ichokwadi kuti vazhinji vateveri veGNU / Linux, ini ndiri muteveri akatendeka weFILOSOPHY yayo, uye une zvibodzwa zvaunofarira, imwe yacho yandinoona kuti uri mushandisi wepasi, Ndiri kureva, iwe unongoda zvinhu zvishoma, asi usakanganise Monopoly nesarudzo yemahara, ini ndinokurudzira kuti uverenge nhoroondo diki uye uone kuti nei Microsoft ichipomerwa Monopoly, muchidimbu, kana muGNU / Linux paine zvishanu zvekushandisa. zvakafanana, kana paine ma5 akasiyana eesisitimu inoshanda, ndiko kupfuma uye kunonaka, pamwe hauna nguva yekutsvaga yakakunakira iwe, ok tanga nekungoshandisa Ubuntu, uye kana Microsoft iri kupomerwa yekuzvitonga ndeyako nekuti mune Dzakare shanduro dzakamanikidza iwe kushandisa Internet Explorer, inova nzira ndiyo yakaipisisa bhurawuza iyo yave iripo zvisina musoro inotsigirwa nekambani yemurume akapfuma kwazvo pasirese, uye kana iwe uchiti inounza mashoma mafomu, ini tariro uye unoona kuti zvese zvigadzirwa Microsoft,Ivo vasingamanikidze vanokumanikidza kushandisa maturusi avo pasina kukupa sarudzo, hazvisi zvisizvo kuti unogona kusarudza pakati peimwe kana imwe, uye ugare neinokukodzera zvakanyanya, ndinofunga ndiko mukana wakakura mune chero nzvimbo. yehupenyu, chimwe chinhu Linux Izvo hazvisi MAHARA iyo Mahara, uye sezvavanogona kukupa iwe kutakurwa kugoverwa ne1000 mafomu ekuteerera kumimhanzi, unogona kuzvisunungura izvi iwe pachako, uye kusiya OS sechiedza sezvaunoda, ipapo ini ndaona kuti semuenzaniso Debian Etch yakafanana neiyo Iwe waishandisa mufananidzo we15MB chete makumi matanhatu, yaive yebasa chairo, ndinofunga haugone kuita chimwe chinhu neWinXP kana VISTA, kwete neiyo pro vhezheni iyo iwe yauchazove akapomerwa Pirate.
Ini ndinofunga kuti kana vakakuudza kuti unopokana neGNU / Linux imhaka yekuti pamwe unofanirwa kuziva zvakawanda nezve izvo zvese izvi nezve, Philosophy.
Venezuela ine chirongwa chakakura chekuenda kuFree Software, chimwe chinhu chinofanira kuomberwa nekuti izvi zvinoreva kuti haufanire kuendesa tekinoroji asi kuti iwe unogona kuzvigadzira pachako, izvo zvinounza vagari kuti vaburitse ruzivo, izvo zvinoumba nzanga yega -kwanira uye nekudaro iwe unoenderera neketani yemabhenefiti.
Nezve izvo zvinofanirwa kunge zvakafanana neWin kana Mac, ini ndinofunga ndiyo yakaipa KUKOSHA iyo chero munhu anoda kukwezva vanhu anogona kutaura, zvine usability, chete kuti ndiyo imwe nzira yekuita zvinhu, kunyangwe MAC yakasiyana zvakanyanya mukushandisa kwaro kune WinXP, inyaya yekuishandisa uye kuinzwisisa, kana uchigona kugadzirisa maRejista muWindows unogona kumisikidza chero iri muLinux uye nezvimwe nekuti kune YENYIKA YENYIKA nharaunda yekutsigira izvi uye zvakanakisa mune zviri pamutemo nzira, Ndiri kuona kuti une rezinesi kuWinXP, iyo yandinoombera, asi ini handibhadhare software inodhura zvakadaro uye izere nezvikanganiso nekusachengeteka, izvo zvaunotaura kuti vakapinda mumaseva anoshanda nasisi vako haisi mhosva yeiyo OS, chero zvazvingava, Imhosva yakakwana yeMutungamiriri, kana akaisa nyore nyore password, zvisinei nepuratifomu, ingadai yakatinhira, uye nekuzviramba, zvinosuwisa kuti vanhu havafarire zvinhu zvichaunza. iwe mabhenefiti enguva refu akadai sekugona kudzidza zvinhu zvitsva, zvinorwadza.
Uku kwaisave kwekukurwisa iwe, ndoda kuti ujekese zvimwe zvinongedzo zvaunotaura zvaiita sezvakakosha kwandiri, ndinokurudzira kuti uone nyika zhinji mukukunda Win anokushandira zvakakwana asi usina chiono chekuti ndiyo yakanakisa pane planet uye kuti haisi monopoly nekuti manyepo akazara, ivo vanoparadza, vanoshungurudza, vanotenga, asi havambobatsira nzanga kudzidza chimwe chinhu chakakosha, asi ini ndinojekesa kuti handisi kuti GNU / Linux ndiyo yakanakisa pane planet, chete kuti iwe unofanirwa kuona ese maonero, sezvavanoedza muLXA, maererano
Kwazisai, shamwari, ini handivengi Linux zvachose, chete kuti kunyangwe nehunyanzvi hwekudzidzisa uye kushandisa makomputa kubva kusekondari kusvika kumakore makumi matatu nematatu zvaiita kunge zvisingaite kushandisa ma32 shanduro dzandakaedza, kunyanya debian Etch 2 uye Kubuntu 4.0 LTS , Kuisirwa zvine hushamwari asi ini ndaifanira kufunga zvakawanda nezve mamwe mazwi ayo kune vanhuwo zvavo vasingazive kwatiri, muchidimbu, kuita chero kushandiswa kwepasirese kwaive kurwadziwa nemusoro, handipokane kuti mashandisiro ayo mumaseva angave akakura , dai ndaive nefekitori ndaizotarisa sarudzo dzinodhura uye dzinoshanda kukambani yangu, ndinofungidzira kuti uchave nemafaira ako emakore akachengetedzwa akatendeka nemafomati e linux uye nekuchengeteka sezvo mashandisirwo awo akajairika kwauri, zvaitaridzika kwandiri zvachose njodzi sezvo ndisiri nyanzvi yekushandisa yeIyo chikuva, ini handirambe linux zvachose, inofanira kunge ichikurumidza uye yakavimbika asi ini ndaedza mac uye ndinoshamiswa neshanduro dzayo dzese dzakanaka uye dzakakwirira pane dzangu xp, asi ini handisiye yangu xp yazvo kana kuvimbika kuti ndizvo, iwe unogona kugadzirisa kune rejista kugadzirisa zvinhu zvakawanda pasina kuve ice cream baba mukomputa uye zvinokubatsira iwe kuita chero rudzi rwekunyorera linux saka hanzvadzi yangu inotaura nezvangu, iye injinjini yekombuta uye inoshandira Nyika yeVenzuelan mukushandurwa kwemahara software uye kunyangwe kushanda neLinux nguva dzese dzinozvivenga sevamwe vayo vese nekuda kwekusaita kwayo, asi inotaura zvimwe zvinhu zvakanaka kwazvo senge kuti yakachengeteka kwazvo kune mavhairasi, asi haina kukwana, kusvika Pakupera kwegore rapfuura vakabatanidzwa, ini handizive kana iri izwi kune server kana maseva (ini handizive) epasirese ruzivo rwetekinoroji nzvimbo uye ivo vakadzima basa rese ravainge vaunganidza, saka haina kukwana, asi vaive ne backup yemazuva 6.06 kana maviri zvisati zvaitika, inofanira kunge iri software yakanaka kuiongorora zvizere zvandinoziva kuti kunyangwe NASA inoishandisa, asi zvinoita kwandiri kuti mac uye kuhwina nharaunda zvinozivikanwa uye nyore kushandisa uye kutevedzera zvinodiwa, ndinofunga izvozviIvo vari kuzondiudza kuti iwe edza iyi kana iyo vhezheni uye ndechimwe chezvinhu zvinoita kunge zvisingaite kwandiri, edza 1 shanduro dze linux kuti uone kuti ndeipi yakafanana ne windows kana mac maererano nekureruka kwayo shandisa, asi zvichiratidzika sezvakandinakira Ngazvive mavhezheni emahara, muchidimbu ini ndinoshandisa uye ndinogara neyangu yakavimbika xp yekare asi sezvinhu zvese zvaunazvo kuti uwirirane neiyo nyowani uye Linux ndiyo yazvino
Chimwe chinhu chandakaverenga mune mamwe maforamu ayo maLinux vhezheni anotanga mumaminitsi asingasviki makumi matanhatu, zvinoita kunge zvakanaka kwandiri, komputa yangu ne xp yangu kubva kumakore mana apfuura, uye rezinesi rangu rapfuura nepakati pe60 Hardware parizvino inotanga mu 4 miniti 3 masekondi ne yako antivirus uye hp software yekamera uye nemabasa mazhinji, hazvizove zvakafanana nelinux asi ndinogara ndichifara sezvo ichingoshanda nguva dzose zvakanaka, dai ndisina antivirus yaikurumidza, zvinoita kwandiri mukana we linux
Oo chekupedzisira chinhu, ndapota musava magandanga ha ha, ndomaonero andinoona hunhu hwevanoshandisa linux, ziso ini ndinoshandisawo linux asi pane mota yangu v6 ha ha uye yakanyanya, ndiudze, vanoongorora windows 7 muEurope vasina ndasiya nekuti inouya neyekuongorora 8 yakasanganisirwa, ini handizive zvakawanda nezvazvo, ini ndinongo gadzira, asi iyo 2 linux distro yandakaedza (kare kare) yaive nekaviri kana mamwe mabhurawuza akaiswa uye hapana munhu anoti chero chinhu , zvinoita sekusina kururamisira? kunyangwe ivo vanoongorora 2 iyo ichauya mukukunda 8 ichave nesarudzo yekuisunungura zvachose uye kunyangwe Microsoft yakumbira vanhu vefirefox kuti vaise yavo yakapfava mukuhwina natively, zvinoita sekusina kurongeka, iyo 7 distro kubva lunux yandakaedza vanouya vakazara nezvirongwa uye hapana anovapomera mhosva yekushanda nechero monopoly, icho chinhu chandisingadziviriri asi chinoita senge chisina kunaka, win inounza zvishoma sezvinobvira mune nyoro kuitira kuti varege kuipomera monopoly nepo ubuntu achiuya pamusoro akatakura nemapurogiramu uye hapana munhu anoti chero chinhu, mukuhwina pane hwakawanda hwesarudzo uye mushandisi anongosarudza pasina kumanikidza chirongwa chekushandisa kana kwete, hazvisi kuti mu linux vanokumanikidza asi zvinoita sekusina kunaka kuti zvinhu hazvina kufanana kune wese munhu
iyi kana iri yekupedzisira haha, ona izvi zvakanakisa http://www.youtube.com/watch?v=E7E4vED103Q&NR=1
murume mukuru wakataura chokwadi, pachokwadi ndaida kusvika kuLinux kuti ndishandise rusununguko rwaunotaura, ndinofunga isu tiri sekutaura kunoita vamwe mukuyaruka kwetekinoroji uye mune ramangwana zvingave zvakanaka kana munhu wese aine huwandu hwezivo kushandisa zvisizvo maererano nekomputa izvo zviripo nhasi, ndapota usakwidziridzwe, ini handisi programmer senge iwe, ini ndinoronga chete muIO code cnc machina, madhirowa uye madhirowa eCAD munzvimbo dzakasiyana dzakabhadharwa uye dzemahara, hofisi otomatiki uye ini ndinoshandisa PC kuti ndiziviswe, kutaurirana uye kuvaraidzwa, ndinofunga Usakanganisa kuti pakushandisa linux imwe nhanho yezvinyorwa uye hunyanzvi hunodiwa, ndinogona kunge ndakanganisa, ndinovimba kuti Venezuela nepasirese zvichatevera nzira inoenda kusiyanisa software, ini ndanga ndichida kukuudza kuti kunyangwe ndisina kushandura mota yangu v6, kana hp yangu 50g graphing calculator, kana yangu xp (yazvino), ndinofunga ndinofanira kukwiza mapendekete ne linux zvimwe kutora mukana wayo zvakanaka, asi ndiruramise kana ino, handina nguva yakawanda yeizvozvo uye ndinofunga kuti zvakasikwa zvichipiwa hunyanzvi hwayo zvinotora ini mwedzi mishoma panguva, ndapota usaputika zvakare, ndinoti mwedzi nekuti ndakaisa kubuntu pane yangu yekare 80 gb sata II hard drive, iyo zvishoma nezvishoma ndakaongorora kekupedzisira nguva yandakatsvaga mafomati mune linux, uye rwanga rwuri rwendo, kuti kana unit ichifanira kubviswa, kuti kana iyo gomo raira kuti kana iyo ikakwira, ndaneta chaizvo asi ndakakwanisa izvo, zvishoma nezvishoma ini ndichadzidza kushandisa chikuva chako, asi kana zvakandiomera kufungidzira vamwe vakaita seni, ingova nemoyo murefu nemaeophyte seni asingatarisi chikuva chavo zvakakwana, uye zvakanaka, chinhu chezvekuzvimiririra chehunyanzvi chinoratidzika kunge chakakura kwandiri uye kuti microsoft yanga ichinetsa nguva zhinji kutsvaga kumisikidza system yavo handikurukure nezvayo, ini ndakangodaidza monopoly asi havana kundipindura, uye tarisai iyi imwe vhidhiyo yakanaka http://www.youtube.com/watch?v=Xgls9IwWUyU&feature=related rombo rakanaka shamwari linux
Usatsamwiswe neimwe nzira, asi ini ndaizeza kutsvaga mukana weLinux mapuratifomu, nekuti ini ndaisazvinzwisisa pamudzi wawo, ndinokupa muenzaniso makore mazhinji apfuura pandakatanga zvidzidzo zvangu zveinjiniya ndakasangana nenyaya inonzi inotsanangura geometry kunyangwe ndiine degree Technologist mukugadzira makanika muchikoro chesekondari, ndiko kuti, kuziva maindasitiri kudhirowa, zvakandibhadharira mumwe neumwe wevandaidzidza navo, zvaive zvakafanana nekuona nyika neimwe maonero, nesimba uye nepfungwa jimunasitikisi isu takadzidza nyaya iyi. kusvika pakukwana uye pakupedzisira ini ndichiri kuyeuka kuti Tese takataura pamusoro pekuti zviri nyore sei, aya ndiwo mawonero andinoona Linux, ini handisati ndazvigaya, kubva pane zvishoma zvandakaona zvinhu zvichiitwa neimwe nzira, haha Kuti vanhu vekuAmerican vanogadzira zvese zvinopenga UNIX yakanyanya kungoita kuti nharaunda yavo ini handina kuiongorora, ndinofunga vachandigadzirisa nekutaura nezveUNIX asi zvakadaro, edza kubata vanhuwo zvavo, nekufamba kwenguva ndichavajoinha ha ha, nenzira uye iri jee, ndakaonavashandisi ve linux vakaita sezvapupu zvajehova ha ha, ndaifunga kuti vachapenga nenguva ha ha, kuri kutamba jee, rombo rakanaka varume vakuru
Zvakanaka, ndinokuudza shamwari, kubvisa bug, ini ndakaisa ubuntu, uye yakapusa kuisa, inokurumidza uye yakajeka, yakanaka kwazvo system, yakagadziridzwa kumagumo uye ini ndaigona kuisa software, ini handikwanise asi ini ndaigona kungoerekana ndaita zvoga, ndakaiisa pane yangu yekare hard drive uye sezvo ini ndisiri kufarira kuita mbiri bhutsu (ndinofungidzira iine rimwe zita) ndakaribatanidza semunhu anogara mukabati rangu, saka ndinogara ndichitanga neyakaomarara kudhiraivha iyo ine windows uye pandinoda kudzidza zvishoma nezvishoma nezve iyi huru linux system ini ndinotanga Kune hard drive iyo iyo iyo yaakaisa, kusarudza yangu mamaboardboard panguva yekutanga uye ini ndakaita zvakanaka mumuedzo, zvichave izvo dai ndaive kuyedza kuona iyo distro yandaida uye inoita kunge yakanaka, ini handisati ndachinja yangu yekare xp, asi ini ndinoshuva dai yanga iine zvinhu zvakawanda zvekuti ndakaona iyo ubuntu yandaida, ndatenda yekare
Imwe nguva nehurongwa, sezvaungaona kubva kunharaunda ino inonakidza, ndinokutenda chaizvo nekundikurudzira munzira yako (kundirambidza ha ha) kuyedza yakawanda yeplatifomu yako yakanaka kwazvo uye munguva pfupi yandakajaira iyo basics mushe, uye zvinonyanya kushanda kuti ndive neyangu xp ine ubunto, mubvunzo shamwari, nemvumo yekutonga ndinogona kuwana mafaera angu muzvikamu zve hard drive yangu mumawindows kubva ubunto (64-bit yezvandakasarudza pakutsvaga) asi kubva kumahwindo handikwanise kana kuwana rakaomarara dhiraivhu pandakaisa iwo matatu ubuntu zvikamu, zvichave zvemusiyano kubva makumi matatu nemaviri kusvika makumi matanhatu?
@Jose, kwete, iyo faira system iri pachena kune mushandisi system uye zvirongwa zvinoishandisa, saka hazvisi nekuda kwekuvakwa. Dambudziko nderekuti, zvinoshamisira, iyi: Ubuntu inouya nemutyairi kuverenga ntfs (yakavanzika uye fomati fomati, inoshandiswa neWindows) asi Windows haina chekuverenga ext2 (nekutadza mu linux, iyo "yakapusa" yeiyo ext * , yemahara, yakavhurika uye isina zvakavanzika) ndanga ndichiedza kwenguva yakareba, asi ndaisakwanisa kushandisa ext * muWindows. Kune mutyairi, asi haachashandi uye haishande kana saizi ye i-node yakakura kudarika 128 (Ubuntu inoshandisa 196, kunyangwe ichigona kuchinjwa nenzira yepamberi kwazvo mune yekumisikidza mode mode). Saka iwe uchafanirwa kuisa zvauchazoshandisa muWindows pane ntfs / fat32 partition
Nenzira iri nyore kune zvinotaurwa naNistuga, ndezvekuti kana muLinux kakawanda zvirongwa zvichinetseka kuverenga kana kuziva Win zvinowedzerwa mune ino kesi, haisi mhosva yeLinux kana vanogadzira, imhosva yeindasitiri yekutendera shandisa neimwe nzira Kunyange yakajairwa yekuwedzera midziyo, mumapurogiramu epasi rose anoshandisa mafomati emahara kana ekuwedzeredza emahara ayo chero munhu anogona kunzwisisa nekugadzira chirongwa chinoshanda nemazvo, kune rumwe rutivi, semuenzaniso, kuitira kuti OpenOffice ishande ne .doc yaive kupokana kukuru sezvo zvaisinga zivikanwe mashandiro ayo 100%, a reverse engineering yakaitwa kujekesa kuti ingashanda sei, maererano nedambudziko rekuverenga zvikamu zveEXT mumawindows zvakafanana havasi kufarira kudyidzana pakati pemamwe masystem panzvimbo pekuti vagadziri Linux haina kukosha kusvika padanho rekuisa zvikumbiro kumapuratifomu akasiyana.
Uye zvakanakisa zvekuti wafunga kupa Linux mumwe mukana, ndinokuvimbisa kuti nerimwe zuva raunoshandisa uchaona kuti hazvisi zveGurus kana super Geek kana nyanzvi kushandisa ino, pamwe neUbuntu, iri zviri nyore kwazvo kushandisa distro uye kugadzirisa.
Kujekesa, ndinokuudza kuti iyi haisi YEDU YEDU kana OS yedu, ndeyevaya vese vanoda kuishandisa uye kudzidza zvakawanda nezvemakomputa avo, panguva ino kana uchiishandisa iwe watove Mushandisi weLinux, uye izvo chikonzero ini ndinokuudza kuti haina kubva kwatiri kana kubva kune chero munhu kunyanya ndewemunhu wese.
Maitiro ekuita Dual Boot kana Windows uye Ubuntu pakombuta imwe, izvo vazhinji vedu zvatinoita kugadzira zvikamu zvitatu pane hard drive muNo3 zvine Windows, muNo1 zvine Linux mune iyi kesi Ubuntu uye chikamu chechitatu cheBackup icho tinoshevedza iyo inofanirwa kugadzirwa neFAT2 faira fomati nenzira iyi unoona kuti zvese muWindows neUbuntu unogona Kuona, Verenga nekunyora mafaera kubva kune maviri maSystem Anoshanda, ndinovimba uye izvi zvichakubatsira, kana uine zvakawanda matambudziko kana kusahadzika nemufaro, tinogona kukubatsira iwe pano kana zvakananga kuMeyili
Kwaziso uye Kugamuchirwa !!!
Ndatenda, kana iyo gadziriso yandakaisa iri yakagadzika bin, iwo maviri masisitimu zvakasiyana asi akabatana panguva imwe chete, iyo linux nyika inofambira mberi nekukurumidza, ndinorangarira makore mazhinji apfuura parwaive rwendo chairwo rwekuiongorora, semuenzaniso kuumbiridza floppy disk mu linux kuti inogona kuverengwa muDOS yaifanirwa kuumbwa sekuwedzera kweDOS chimwe chinhu senge extDOS Ini ndinofunga ndinorangarira (asi makore mazhinji apfuura zvakangoerekana zvaitika chimwe chinhu), zvinhu zvakanaka kwazvo zvandiri kutsvaga nezve yako system
chokwadi chechokwadi ndechekuti chokwadi chaicho ndechekuti ichokwadi vErdAD iyo ubuntu ichiri baba vemahwindo tisingatauri debian, gentoo, fedora opensuse nezvimwe xD
usarwa kana wea iri kupfuura yakajeka,
Uye iyo ubuntu yanga iri hafu yakaipa maererano neshanduro dzekupedzisira, fungidzira kana zvaive zvechokwadi!
dzikama babe !!! kuti iyo vhezheni nyowani ichave yakanyanya ultra mega zvirinani ...
Pindura kuna baba!
Mukuyedzwa neUbuntu 9.04, zvakaonekwa kuti iyo yekukodha nguva yaingova masekondi gumi nemashanu chete, pazasi peiyo nhamba yakapihwa neiyo ongororo yaunodoma muPost iyi.
pano iwe unogona kuzviona
Zvakanaka shamwari iyo nyowani ubuntu inotanga mumasekondi gumi nemashanu kuenzanisa izvozvo neiyo Nintendo ubuntu iri nani uye nekukurumidza uye isina mavairasi
Pindura ku shinta_87
ndimi mhepo dzakanakisa akadaro
linux inondisemesa, ndinosarudza kunzvenga kubhadhara windows uye kugadzirisa matambudziko uye nehukama hwayo hwakanaka pane kunge uri mu linux uye gadzirisa iyo linux matambudziko, muchidimbu, linux ndeye mamisios asina mari uye windows kune avo vane mari uye vanoda kuishandisa zvakanaka. Kuva narombo linuxeros ndinonzwa urombo nesoftware yavo yemahara, siya izvo kune varombo chaizvo .. uye incema vanoita mavevechiles nelinux yavo kwavasingakwanise kutamba mitambo iri pamahwindo uye pamusoro peiyo ivo saka conchuted zvekuti vanotamba uye ivo vanoramba vachishandisa windows uye meseji yavo iri kunyatso kutumirwa kubva kumawhepo Dai pasina mahwindo vangadai vasina kuziva kuti komputa chii ... kusatenda ... bata pamahwindo, ndinokumirira mawindowos 7 ndave kutochengetera muchina wangu uye ndichitamba mitambo yakanakisa nedirectx 10
Mhinduro kwauri ndiyo yakanyanya mhepo
Ini ndakaisa ubuntu 9.04 uye ndiri kuramba sembwa kuterera kune rwiyo mu mp3. Hazvibatsiri. Izvo hazvisi zvevanhu vasina internet, (ehe, ini handina internet), nekuti pachinhu chimwe nechimwe chaunoda kuisa chinokumbira iwe kuvimba. Zvakaoma kwazvo. Nguva nenguva ndinowana mukana weinternet kubasa uye ndangokwanisa kuisa vhidhiyo kadhi mutyairi uye madhiraivha eprinta. Izvo zvakaoma kwazvo linux vanachinda. Hazvirevi kuti ini handizvifarire, asi hazvisi zvevanhu vasina internet.
@ Damien: Ndinokurudzira kushandisa Debian Stable. Unodhawunirodha maDVD mana (kana maCD gumi nerimwe), unodzinyora uye ipapo unenge uine zvese zvaungade.
Ini ndinofunga vhezheni 9.4 yakabuda ne ext4 iyo inovimbisa kutanga uye kudzima uye zvese izvo zvinhu ini ndinofunga kuti windows 7 iri kumashure nekarmic koala ndine urombo kwazvo kune iyo post asi ichokwadi vhezheni 8.10 yaive fiasco, iyo 9.4 yaive kushamisika chaiko kwandiri
Windows 7 = Tenzi Mukushandisa Kudzora.
Linux = Inesimba.
Shandisa iyo inokodzera zvaunoda.
Ndinofanira kukorokotedza Microsoft kuti hongu, nerutsigiro rwehardware rwakaitwa muna 7. Inoita kuti kudzoreredzwa kwesystem kunyatsogadzikana.
Kune linux, tinofanirwa kugara tichionga ...
Usavhiringidze Linux neUbuntu. Ubuntu is shit, ichienzaniswa neWindows 7 haina chekuita.
Zvino, kana tikazvienzanisa nemadistros makuru, saDebian, simbe, kunyangwe naMandriva, zvinhu zvinoshanduka.
Cereal, unogona here kupokana nekomendi yako zvishoma.
Iye zvino zvese zvinoita sekutaura kwa troll.
Ko Tyty0 yakadzoka ???
Kana windows 7 ichishandiswa zviri pamutemo uye nekutsigirwa nesu tese vasingakwanise kuwana mazana emadhora zvayinoita, apo Microsoft inofunga nezvenyika yese kwete vapfumi chete, ndiudzei. Kusvika ipapo chiuru chekutenda kuUbuntu, ndiyo yakanakisa.
Ini handibvumirane neye boot nguva pakati peLinux neWindows.
Kazhinji, pandinotanga yangu Ubuntu 9.10-64 sisitimu yakagadzirira kutsigira ese mabasa andinoitumira - email, angangoita matatu Firefox ane mapeji mashanu mundangariro, Windows virtualization kuburikidza neVirtualbox, IP kutaurirana, P5P kurodha pasi, ... -. Kune rimwe divi, pandinotanga chero vhezheni yeW .., ini ndichiri ndisina 2, iyo sisitimu inoramba ichitakura kwemaminetsi mazhinji, inoita mashandiro andisingazive nezvayo uye mushure menguva inonditumira mamwe asinganzwisisike mameseji. Kubva ipapo, mamwe emabasa andakatanga kuita mashoma mashoma apfuura anotanga kutanga. Ehe hapana kuona.
Pindura kuna Anarres
Kutanga: MuLinux handimbofa ndakave nedambudziko rehutachiona uye ini ndichachengeta fomati pamwedzi miviri.
Chechipiri: Sekutaura kwaAnarres, isu tinoti chii kutanga? Nekuti nekukurumidza apo Ubuntu painovhura graphical nharaunda iwe unogona kutanga kuvhura zviuru zvezvirongwa uye zvinoshandiswa panguva imwechete usingamiriri uye usingatyi kupunzika ..., uri muGüindous unofanirwa kumirira zvirongwa zvekutanga kuti upedze kurodha kuitira kutanga kusevha mambure kana kuvhura gwaro (uye sezvaunovhura akawanda maapplication, anorembera kuti asachinje).
Yetatu: Sekutaura kwerima, mune 2Gb yekumisikidza inosanganisirwa: mumhanzi mutambi, vhidhiyo, hofisi otomatiki, yepamusoro mufananidzo mupepeti, pdf muoni ... kuti mune 11GB yeM $ masisitimu ivo havasi ...
Chechina: kana paine Live CD kuEDZA W ... uye uone kana ichindipa chokwadi kana kwete, ndichaiyedza (uye ndiri murume weshoko rangu), asi apo ini ndichienda kubva pakuisa chimwe chinhu uye kufomati vhiki.
Chechishanu: Kana kushandisa Güindous application kuri kutyisidzira hupenyu, ini ndinoshandisa VirtualBOX (ini handidi kuti ndive ne11GB yedhisiki yakaoma yedhisiki, inova yezvinetso, ndichabvisa pasina kurasikirwa chero data kubva kuPC.
Wechitanhatu: Kana ndakanyatsopatsanura dhisiki rangu uye ndinofanira kuumbiridza Ubuntu, ndinogona kuchengeta mafaera angu (/ kumba), iwo eiseva (/ var / www /), nezvimwe ... kana uchidzorera uye neW ... , Aihwa
Chechinomwe: Ndinewe Nitsuga: Ubuntu inoona mhando dzese dzedhisiki mafomati, nepo M $ masisitimu achisiya iwo akawedzeredzwa, reiser, nezvimwe ...
Chechisere: Kana ini ndikaisa chero Linux system, inogadzira grub iyo inondibvumidza ini kubhoti neYEMA system iyo yakatove yakaiswa; ikozvino sechinangwa W ..., ndinogona kutaura zvakanaka kutanga nezvanga zviri pamberi (akaropafadzwa superGRUB !!)
Zvisinei… .. uye ndinogona kuenderera asi handifunge kuti zvinodikanwa. Ivo vedu vanoziva Linux tatoziva nezvezvakanakira uye vanhu vanovhara maziso avo uye vanoramba kuona kubva panguva yekutanga havasi kuzovaita kuti vachinje pfungwa, saka sei kutambisa nguva
Zvakanaka ndinosiya vhidhiyo:
Iye zvino zvandinoona kuti ndeipi nhamba yeakanyanya kufarira kutaura ini yandawana xD xD
Pindura kuna Lehmer
MiRA linux ndiyo yakanakisa pane ese nekuti inowana kukurumidza kutanga uye kumisa kumhanya inomhanyawo chaizvo !!! .. Ndine makore gumi nemana uye ndinoishandisa .. ndinodzidza muchikoro chehunyanzvi uye tinoshandisa windows mukutanga, hazvisi nyore kwandiri kuti ndishandise linux asi Kazhinji yenguva dzandinoshandisa linux ndinoida uye ndinoibata zviri nani pane windows !!!… Yakanaka !!… Iyi gitare tuner yatounza xd, chii chisingadaro? … Ojla uye vanhu vazhinji vaimbopedza nguva yeVIRUSES !!! ... windows inononoka kupfuura kamba uye dzimwe nguva inoturika, zvisinei linux inopesana, inokurumidza asi zvese !!! ... Iishandise !!! ...
Ndine muchina une 1gb yegondohwe p4 ye2.4ghz vhidhiyo ye64mb 250gb ye hd uye ini ndakaisa windows 7 uye yainonoka (iyo yaive beta), uye ikozvino ine ubuntu 8.10 inoshanda zvirinani, sezvazvaive ne winxp kana zvirinani :)
Ngatione zvauri kuedza kundiudza, kuti software yemahara inoshanda yakaipa nekuti iyo $ 150 yakabhadharwa imwe inoshanda zvishoma nekukurumidza? iye, iye, iye, iye akanaka anopukuta avo vanopinda mubhokisi asi ini ndinaro zvakajeka never !!! zvakare ndezvipi zvinodiwa zvinoda W7? nekuti tekinoroji yepc yangu yatove nemakore mashanu kusvika matanhatu ekuberekwa uye zvinoenderana nekodhi yeMicrosoft haina basa.
Pindura kune vicente
Rakawandisa ruzivo rwe dehenya rangu, ndine Ubuntu 9.04 yakaiswa pane yangu acer aspire imwe inomhanya neese mhedzisiro isina kumbofungidzirwa uye iine windows xp ganda, uye ini ndinogona kukuudza iwe kuti rinotaridzika zvakatonyanya nani kupfuura XP pachayo kune bhiriyoni nguva, uyezve kuti maererano nefaira kufambisa iri miriyoni imwe nekukurumidza kupfuura XP (zvirokwazvo ichiwedzeredza zvishoma xD) uye kurodha pasi mafomu anosangana nezvandinoda ingovhura maneja wekurodha pasi uye nekuisa uye kunakirwa! UBUNTU 1 NDIYO MUTUNGAMIRIRI UYE ACHAVA KWENGUVA YAKAreba, ngatione kuti distro iyi inoita sei nekuuya kweiyo itsva Google OS !!! = D
Damn, ini ndakakanganwa kutaura kuti ini zvakare ndine windows 7 yakaiswa uye haina kushata, asi ichiri kunonoka kupfuura ubuntu uye yakaipa… = / Uye chakakosha kupfuura zvese ichiri WINDOWS T_T
Ichokwadi maererano ne "nyaradzo" mukushandisa kwemazuva ese, Windows iri nani. Hazvina kunyatso gadzikana kuti muUbuntu ndinofanira kushandisa maminetsi akati wandei ndichigadzirisa chirongwa icho muWindows chinongoburitsa zips uye chinomhanya. Kune zvakawanda zvakadzama muUbuntu izvo zvinofanirwa kuve zvakarongedzwa zvakanaka kuti utange kukwikwidza neWindows, kutanga ne "kutaridzika" kweizvi, ndinobvuma kuti inoumbika zvachose uye inogona kuiswa kune zvatinoda, asi kune musina ruzivo mushandisi uye asina nguva yekugadzirisa OS yako haina kumbobvira yataridza chitarisiko chauinacho izvozvi. Ndinovimba inovandudza uye kuti inoramba ichisununguka !!
HAPANA shamwari, ubuntu ine nyaradzo yakawanda uye kana iwe ukawana kubva pakuenzanisa maonero maererano nekushandisika iri chiuru zvirinani ubuntu nekuti iwe unongofanirwa kuvhura maneja wekuburitsa uwane zvaunoda, gadza uye voila! Kune zviuru zveimwe nzira uye mumahwindo mashoma kwazvo uye nekuwedzera kune ese shareware uye kubhadhara. = /
Uye zvakare, kune avo vedu vanofarira nharaunda windows, isu tinokwanisa kurodha ganda reganda rinoshandura zvachose kuoneka kweiyi distro mumahwindo xp nenzira yakafanana. Saka kwaunomuona ndiye akanakisa !!!
Zvakanaka, ini ndine windows 7 uye ubuntu 9.04, uye pakutanga ini ndakashamisika nemawindows 7 nekuti chokwadi inomhanya nekukurumidza uye haina kumhanya semaitiro mazhinji uye ine kuenderana kwakanaka, asi senguva dzose, yatove yaishandiswa kweinenge mwedzi.kunonoka xD unotanga kuisa mapurogiramu uye inotanga kunonoka zvinotora nguva kubhootesa desktop, nezvimwewo, uye chakanyanya kushata ndechekuti inobvisa grub uye ini ndaifanirwa kushandisa supergrub kudzoreredza yangu runako ubuntu, mushure mechinguva chekusashandisa ubuntu Icho chinhu cheboka, izvozvi zvandinodzokera kuUbuntu, shanduko inoonekwa chaizvo, Ubuntu iri mashandiro akawanda, ndinogona kurodha pasi mavhidhiyo, kuona bhaisikopo, kutumira pano, uye senguva dzose, uye ini ndinoedza kuita zvakafanana muWindows uye ini zvinondikurudzira zvese uye hapana chandingaite. Ivo vanoudzwa nemushandisi anoshandisa ese ari maviri masystem anoshanda, kunyangwe Ubuntu isina kunaka semamwe ma distros, ichiri pamusoro peiyo huru Windows 7. Saka ndinokukoka kuti uedze iyo 2 OS uzvitonge wega. iyi ongororo ini kubheja kuti kana vakazviita mukati memwedzi miviri kana mitatu yekushandisa vanozoshandura vachida linux nekuwanda. Salu2
Ini ndinoda ubntum nekuti haina hutachiona
HAPANA shamwari, ubuntu ine nyaradzo yakawanda uye kana iwe ukawana kubva pakuenzanisa maonero maererano nekushandisika iri chiuru zvirinani ubuntu nekuti iwe unongofanirwa kuvhura maneja wekuburitsa uwane zvaunoda, gadza uye voila! Kune zviuru zveimwe nzira uye mumahwindo mashoma kwazvo uye nekuwedzera kune ese shareware uye kubhadhara. = / Pamusoro pezvo, kune avo vedu vanofarira nharaunda windows, tinogona kurodha ganda reganda rinoshandura zvachose kuoneka kweiyi distro mumahwindo xp nenzira yakafanana. Saka kwaunomuona ndiye akanakisa !!!
Kana iwe uchingofanirwa kuvhura iyo package package. Kana iwe usina maneja wepakeji, iwe unoenda kune cyber uye kurodha pasi chirongwa, wobva wadzokera kune zvinoenderana .. hahaha
Pasina internet, pinda mukati mekoni, kunyange zvisiri zvakaoma. ahh uye nenzira, gadza zvinoenderana pamberi kuitira kuti zvikubatire. Ngatiendei kupenga linux.
3ric 3inar akadaro
Kwete zvechokwadi Ubuntu iri nani kwandiri, ndine 255 gigabyte hard drive uye 512 megabyte RAM processor ¬ ¬ usaseke.
Ndiri kushandisa Windows Vista Kumba Basic 32 Bit, ine yakawanda yediski yakashandiswa, bhokisi rangu rinoita ruzha, Mwari ngavarambidze, inononoka haha.
Uye kana uchishandisa Ubuntu 9.4 uye munguva pfupi 9.10;)
zvinowana zvakanaka, hazviite kana ruzha rudiki, zvinotora masekondi asingasviki gumi nematanhatu kurodha, ini handimirire kana mdrz kuti iite kuti nditange kuvhura paInternet, iri mumawindows vista uye kare mune yangu Xp bhokisi iyo ndanga ndapererwa, ndakangodzvanya pakona pasingasvike masekonzi mashanu mushure mekupinda mukati uye windows inotumira meseji bhokisi rinoti "Windows Explorer haisi kudaira."
Uye kana izvo zvisina kukwana, ini ndinongoshandisa makumi matatu egigabytes enzvimbo yakazara yeUbuntu, 30/30 inoshamisa sezvinoita simba rerunako urwu.
Kana iwe uchifunga nezve kuiisa, zviri nyore kwazvo neRarama CD, kurodha pasi kubva pawebhusaiti yepamutemo, kuipise nehurongwa hwemafaira emifananidzo eIO, akadai saNero kana DVD Videosoft nezvimwe.
Paunenge uchinge waona zvaitwa, iwe unoisa mukati, tanga iyo setup uye sarudza kuiisa muWindows, tevera matanho, tangazve uye ndizvozvo.
Muchokwadi, ino system ndiko kushamisika, ndinoida haha.
Pindura 3ric 3inar
Hahaha ndeyekutyora bhokisi newe.
Kana chiri chinhu icho vashandisi veLinux vasingakwanise kurambwa, iko kutarisira. Tarisiro iyo isisisiri yakadaro, asi kuve yakanyanyisa kubuda muchokwadi.
Pindura kuna nom
8 uye nehafu mwedzi yakanonoka, asi troll yasvika.
Windows 7 inouya yakanaka kwazvo uye inokurumidza, chokwadi chakashanduka zvakanyanya, asi kunyangwe zvakadaro ini ndinofunga kuti Ubunto inogamuchira kurohwa chaiko mumativi ese. Windows ichiri kureva maVirusi, zvikanganiso zvekuchengetedza, zvishoma zvigadziriso renji uye yakakura monopoly kuti iwe ushandise ayo mashoma mapurogiramu. Ini ndinogara naUbuntu ndisingafunge kaviri, chokwadi ndechekuti ivo vari kumberi kwemahwindo nezvakawanda.
hahahaha zvinondisekesa kunzwa kuti ubunto huri nani hahahaha Chokwadi chinoratidzika kwandiri sechinhu chakapusa pachikamu chea linuxers kutaura kuti yavo yekushandisa sisitimu ichaenderera mberi haha ​​munhu wese anoziva kuti iri yemahara OS uye kunyangwe zvakadaro kwete imwe njodzi yekuyedza nekuti Sezvo isu tese tichiziva kuti iri hurombo system kana ichienzaniswa neWindows, ndinoziva kuti vacharamba zvandiri kutaura asi ichokwadi chaicho, ini ndiri wepakati mushandisi, hapana munhu anogona kundiudza kuti ini handina ruzivo. asi windows inoita kuti hupenyu huve nyore kune chero mushandisi wekutanga pasina chero ruzivo asi zvisinei vanoenda ku linux vanofa vachiedza kuita internet modem modhi ishande kana chimwe chinhu chiri nyore kwazvo sekubatanidza usb kiyi hahaha chimwe chinhu chidimbu chekeke chema windows, ikozvino kana isu tinotaura nezve windows 7 haha ​​iyi sisitimu ndiyo yakanyanya kunaka yandakaona pazera rangu makumi maviri nerimwechete ndakafara Ndinoyemura Microsoft nebasa rakanaka iri kwavari.
ikozvino linux inzira yakashata kwazvo, sekutaura kwemumwe munhu uko! Anenge ese software aripo eiyo system akagadzirwa nevashandisi vamwe uye, zvichidaro, iwo zvirongwa izvo mukati memazuva anonamira uye kana iwe uchizvida, haisisiri dambudziko hombe. MuWindows zvese zvinogadzirwa nemakambani anoremekedzwa uye neunyanzvi mukomputa, saka zvese zvinoenda kuAsia, ramangwana repamberi maererano nekombuta technology, iyo nyowani haimire kubuda, chimwe chinhu chiri muLinux chete muzviroto zvavanoita.
asi zvakanaka ndinoyemura simba ravo kuyedza kugutsa vanhu nezve penguin asi ini ndinofunga vanogona kufukidza pamwe 10% chete kana Microsoft ikanyangarika asi ini ndinoona izvo zvakaoma kwazvo:
Zvakanaka, kana Microsoft yanga isipo, chimwe chinhu chakanyanya kuoma asi iri pfungwa yandinofunga zvingave zviri nani kwandiri kuti ndifambe ne mac kunyangwe vakatora ziso kune iyo system vasati vatamira kune linux: Ini ndoda kubhadhara mari yangu nekuti ini ndinoda zvese zviri nyore kwete nzombe yematambudziko asina maturo senge iwo linux anotambura ne:
Wekupedzisira kuburitsa meseji iyi anofanirwa kunge ari mukomana ane makore mapfumbamwe ekuberekwa nekuda kwechiperengo uye chechipiri nekuti zvaataura hazvina musoro. Zvisinei, mamoderator epawebhusaiti anonzi ari mukutarisira kubvisa posvo.
Kwazisai munhu wese ari pano, ndichitarisa hurukuro iyi, iyo isinganzwisisike, iri nani kana yakaipa, muGNU / Linux tinotaura nezverusununguko, masystem eMicrosoft anove akakwirira, pavanomira kutipedza nemitengo yemalayisensi, ndinoshandisa windows kubvira zvabuda On 3.1, ndakave muropa kune ino system, ine windows xp, zvinhu zvaive uye zviri nyore, zvekuti tinogona kudzokedzana pakudzidza sainzi yemakomputa, GNU / Linux inokudzidzisa, inokumanikidza kuti ushande, mazuva ese iwe unodzidza chimwe chinhu chitsva, uye unosangana nevanhu vasingaperi vaunodzidza navo nekudzidzisa, kana paine nharaunda. GNU / Linux.
ps io Ndine mavhiki maviri andinodhirowa xp uye ndinoisa ubuntu the best k iwe haudi kuisa madhiraivha kana chero chinhu chakadai iyo odhiyo vhidhiyo mm ps zvese nekukurumidza uye sim kuisa chero chinhu kwete k ne xp ai yauri kutsvaga isa madrives k usimbe asta munin'ina wangu ane makore masere andifarira uye akangodzidza kuisa GIM 2% zvirinani kupenda uye zvinhu zvakadaro kuvana ndiri kuenda kubva kuhunhu hwangu 8 haha: P
Pindura kuna aleez
Handifunge kuti ndakachinjira kumahwindo zvakare apa ndine zvese uye zvirinani
Uye iyo 9.10 yeubuntu? Uye ivo vanofanirwa? Uye mamwe ese ma distros?
Iwe uri mudzidzi. Windows haizombove iri nani kupfuura Linux.
Ndakaona imwe pc nyowani ichitadza ne w7 64 bits, uye yangu Ubuntu 9.10 ichimhanya palaptop kubva makore mana apfuura yakakwana uye haina kundipa chero kukanganisa kana chero chinhu chakadai….
Iye mukomana anosema linux.
1. Matambudziko eLinux anenge mashoma ndaagadzirisa pasina rubatsiro nyore kupfuura eaya windows.
2. Haushandise linux nekuti hauna zano.
3. Mahwindo haabhadhare (piracy) andisingashandise mari nawo.
4. Ini ndinogona kumhanya windows application pane linux.
5. Handina hutachiwana pane chero dhiraivha yangu.
6. Ndisati ndaziva windows pc ndaive nayo imwe chete ms2.
7. Iyo yekutanga operating system yandaiziva nezvayo yaive machintosh.
8. Mitambo inoita kuti ndibve ziya.
9. Unofanirwa kunge uri benzi kushandisa mari pamahwindo, antivirus, hofisi….
Kugona kurodha pasi kana kuteedzera.
Kunyange zvakadaro, iwe hauzive
Ini ndaishandisa ubuntu kubva 8.9 kusvika 9.4 pane presario f755la lap, zvese zvakandishandira kusara maikorofoni yemukati, ini handina kuzombozvikwanisa kuzviita, hongu haisi mhosva yelinux asi yevagadziri sezvo ivo vasingatsigire linux kana handina rutendo mazviri kana kuti handizive kuti chichava chii, muchidimbu ndakashandisa akawanda linux distros senge rakavhurika suse, mandriva 2008 na2009, kubuntu uye ubuntu uye chokwadi ndechekuti anoshanda masystem asi mumaonero angu dzimwe nguva ivo siya zvakanyanya kudiwa, ndakatamira ku xp zvakare nekuti windows vista haizombodzoka nekuti inoyamwa kanenge palaptop iyi, nekuti ehe, windows vista inodya yakawandisa gondohwe uye pamwe kuti ishande pa100% iwe unofanirwa kuva nayo zvishoma 4gb yegondohwe ...
Iye zvino ndatamira kumahwindo manomwe uye chokwadi chiri kwandiri icho runako, chiri kukurumidza, chakatsiga uye chakanakisa uye zvachose zvese Hardware zvinondishandira ini ndinofunga ndichagara nemanomwe, ndinofunga hapana chikonzero nharo pakati peanoshanda masystem, ndeapi ari nani, ndinofunga isu tinofanirwa kushandisa iyo inokodzera isu zvakanyanya, tinoifarira uye tinonzwa kugadzikana, zvirokwazvo musiyano uri pachena kwazvo mune iyi nyaya ndeyemari nekuti Linux ndeye mahara uye Windows futi kana iwe ukachipamba hahahahaha (IYO YEMAHARA YEMAHARA MISANGO HAIITI KUTI NDISUNGWA) asi zvakadaro zvakadaro, kwaziso kune linuxera uye windowsera nharaunda, zvichengetedze uye usarwa XD ...
PS: chinhu choga chandinosuwa kuita compiz :(
Pindura kuti chobe
Ini ndaive ndakanganisa ndaida kuti ubuntu 8.10 uye pazasi ini ndaida kutaura zvinoshamisa kushamisika hahahahaha
Shamwari meadow akadaro
Ndine dambudziko, Ubuntu 9.4 yakaiswa padiski rese pandakavhura komputa, handichatangi se Windosxp asi seUbuntu, ndingaite sei kuti ndiibudise zvakare uye kuidzosera ndichishandisa imwe nzvimbo pane hard disk
Pindura kuna Amable Prado
@Amable Prado: Kana iwe ukaiisa pane rese hard drive, wakadzima Windows neese data rayo. Unogona kuona kana ichiripo nekubata pasi shift painoti "Grub loading ..."
Iyo nguva inovhurwa michina haina muto, nepo windows (ese mavhezheni) painotanga, inononoka kutakura ZVESE zvirongwa, madhiraivha uye ekutanga-kumusoro maficha, kutora yangu AMD Phantom II X4 muchina ine 8Gb uye 1tb HDD kutenderera makumi mashanu masekondi (kuva nemazuva gumi nemashanu akaumbwa uye akaiswa windows 50) ubuntu inondikanda iyo yakanakisa uye inoshamisa kumhanya kwemasekondi makumi maviri neshanu nemakumi maviri neshanu kurodha zvese, muchina ikozvino wakasununguka kuita zvandifadza.
Pindura kuna nikelito
Pindura munhu anopinda
Kuna Jose ... ingori nuance ... iwe unoti iwe unoshandisa iyo pc kubvira kusekondari ... ndinofunga ingangove iri pakati pemakore gumi nemana kusvika gumi nematanhatu ekuberekwa kusvika makumi matatu nemaviri aunoti iwe unayo ...
uye iwe wakangoedza linux ...
dai makore iwayo iwe waive wakazvigoverana ne linux pane windows ...
Ini ndinofunga kuti izvo zvaunazvo itsika chete .. zvinova nyore kushandisa linux kubira nekuchengetedza windows ^ ^
Zvakanaka, ndakaverenga maforamu mazhinji pane idzi misoro ... iyo yakafanana nezvose ...
Kana iwe uchida mota yekukuendesa kumba kubva kubasa uye zvishoma zviri nani nemumwe munhu .. kana uchizoenda kumunda SUV
kana iwe ukaenda kunoredza ... kamwe pagore ... nekamwe tambo uye chirauro zvinokuitira basa racho ...
Kana iwe uchida hove zvakanaka, iwe unowana tsvimbo yakanaka ...
Izvi zvakafanana kana iwe ukagadzirisa zvekuteerera mp3, tarisa mavhidhiyo uye msn .. zvakajairika kuti ivo vanokanda zvimwe kuburikidza nemawindows izvozvi kupfuura kana iwe uchida chimwe chinhu chakasimba chakadzama unenge uine linux ... mutsauko chete uyo une pamusoro zvataurwa kuti pano chinhu chakanaka chinouya
akasununguka ^ ^
Pabhokisi pakanzi: "Inoda Windows XP kana yakakwira"…. Saka isa linux.
Windows 7 chishamiso chaizvo, haina kana kuenzaniswa nemamwe windows, ini handidi kuita nharo nezve ubuntu, ndeimwe os
zvakasiyana nemahwindo, ngatitaurei zvese nezve windows kana zvese nezve ubuntu, ini ndinogara nema windows kwehupenyu hwangu hwese zviri nani
Zvingave zvinonakidza kuziva kuti sei usingaenzanise Windows 7 neiyo yazvino vhezheni yeUbuntu? Ini ndinotaura izvi nekuti kubvira 7 payakabuda kwaitove nemamwe mavhezheni eUbuntu anoenda ku9.10 uye kwete 8.10.
Nei uchitevera urwu rudzi rwezvinyorwa zvakanyatsoshandiswa?
Nenzira, laptop yangu inotendeukira muUbunto muna 35sec chete saka handizive kuti ndevapi pc ivo vanoita bvunzo dzinofadza, chimwe chinonakidza ndechekuti Windows 7 inotenderera mu48sec mumakumbo mamwe chete.
Iyo yekudzima data kana ivo vangave vechokwadi asi zvinonditora ini 5sec kudzima kubva kuUbuntu ..
Ndiri kukunyorera iwe semushandisi weUbuntu Koala uyo akaenda kune rimwe divi rakatarisana mazuva mashoma apfuura.
Ini parizvino ndine Windows 7 Imba yekutanga (yekutanga). Inotanga uye inodzima nekukurumidza seUbuntu, kuenderera kweCUU kushandiswa kwakafanana. Kunze kwekusuwa kwakashata kwekuve neantivirus yakaiswa, Windows 7 inova yakanyanya kuita mushandisi wezuva nezuva, anoda kuenderana kwekushandisa, mune yangu mitambo mitambo uye Itunes yeiyo iPhone.
Zuva reUbuntu rinobvumira 100% kuenderana nemashandisirwo kana mitambo, ini zvechokwadi ndichachinjira kuUbuntu. Vashandisi vanoda OS inoenderana neLinux kernel asi inoenderana neWindows application nemitambo, iyo inotipa yakachena Ubuntu uye kuti isu tinokwanisa kuisa izvo zvatinoda kubva pakutanga pasina matambudziko. Parizvino uye zvinosuruvarisa kutaura, Ubuntu uye akafanana distros chete zvinopa vanomutevera kune zvakajairika maturusi, mukushandiswa kwezuva nezuva paPC. Zvakafanana nekufananidza xxxxxx neIphone.
Ndati, muchidimbu tinoda Windows yakavakirwa paLinux :)
Pindura kuna Trevice
Vanoshaya chimwe chinhu (ini ndinochidaidza kuti KUSVIRA KWEMAZVI… ..XD) ndange ndaudza vanhu vaviri kuti vashandise ese masisitimu kwenguva imwechete yevhiki, uye ona kuti ndeipi iri nani, uchaona kuti mashandiro aUbuntu haana kuchinja zvakanyanya, nepo mumahwindo unoona matambudziko anotanga kubuda, chenjera ndiri kutaura nezvekusiya muchina kwemazuva manomwe akateedzana ndisina kuudzima, zvakanaka huwandu hwandakasvika hwaive nemazuva mashanu, pazuva rechitanhatu ndakaudzima nekuti munzvimbo yandinogara Saka ndichiita kugadzira kune tambo yemagetsi yeKisimusi iri kuuya, uye ndinogona kukuudza kuti ndaita zvese muUbuntu uye pazuva rekupedzisira ps zvakare iri kuenda kwazvo, hapana zvikanganiso, kwete kunonoka, ini yakaita 1D animation, pikicha montage, kurodha pasi kubva kuYouTube mavhidhiyo, uffffffffffffff, mhedzisiro yakaenzanawo ……………… XD
Ndakaita izvi neUBUNTU 9.10 Karmic Koala
hahaha, windows inoenderana nelinux?, hahahaha, ndeapi windows anovhara nekukurumidza kupfuura linux? ha ha ha.
Ndinofunga iwe uri mune zvakasiyana zvakasikwa kupfuura isu vamwe. Kuti iwe unofarira windows zvimwe hazvireve kuti linux yakaipa kana kuti ine zvikanganiso senge windows, linux haina kukwana asi iri padyo.
tisati tatsoropodza nei tisingayedze zvese?
Ini ndinoshandisa ese masisitimu anoshanda pane yangu "yakajairwa" 2 gb ram 2 ghz laptop uye ati x1250.
Windows 7, kusvika ichangobva kuiswa, inonditorera masekondi makumi matanhatu kutanga uye masekondi gumi kuvhara.
Ubuntu, ichangobva kuiswa, kana izere nezvirongwa, inotanga ini mumasekonzi makumi matatu nemashanu kana makumi mana uye inodzima mumasekonzi mana kana mashanu.
Zvakanaka, ini ndaive mudziviriri weWindows. Ndanga ndapfuura neanenge ese masisitimu. Uye nekuda kwekundiruma muforamu, ini ndaisa ubuntu 9.10. Aya ndiwo mhedziso yangu mushure memazuva mashanu ekushandisa:
1. Ubuntu yakanyanya kuomarara kushandisa. Kunyanya nekuti isu tajaira Windows.
2nd. Kuve zvakanyanya kuomarara kunowedzera kunakidza. Kuzviisa neimwe nzira, kunonetsa. Kukunda unoziva iwe kuti unoriisa uye inoshanda nemazvo. Iwe unodzvanya kiyi uye zvese zvinogadziridza. Ubuntu inogara iine matambudziko uye izvo zvinoita kuti zvinakidze, nekuti pakupedzisira unoziva kuti iwe uchavagadzirisa.
3. Windows haina kuchinja. Mushure mekuyedza Ubuntu unoona kuti zvinofinha sei Windows. Ndakave neWin 7 kwemasvondo matatu uye ini ndiri kupfuura kuneta nechinhu chimwe chete.
4th. Ini ndakawana imwe yakanaka zvekare laptop uye ndakaisa Ubuntu mairi. Iyo inomhanya kunge yangu huru laptop uye bhutsu kumusoro panguva imwe chete. Iyo yekare ndeyeCeleron pa500 Mhz, iyo "nyowani" Dual Core pa1,6Ghz.
5th. Win 7 inoisa uye inogadzirisa zvese yega. Asi Ubuntu 9.10 zvakare.
6th. Kune munhuwo mushandisi (internet, tsamba, mutumwa «aMSN paLinux» nezvimwewo), Ubuntu hainetsi.
7th. Paunenge iwe uchinge wadzidza zvishoma zvekutanga zvinhu muLinux, hauzombofa wakatemerwa neiyi sisitimu zvakare. Iwe unongofanirwa kupa imwe nguva yekugadzirisa.
8. Uine Windows kana usina internet (ndiani asina internet?) Unogona kushanda, neUbuntu zvinhu zvinobva zvaoma. (Iwe haugone kubvunza maforamu, semuenzaniso).
Zvakanaka, sezvauri kuona, zvakanaka kuti uzviedze kwechinguva usati wapa maonero ako. Uye nerombo rakanaka, zvichingotevera, sarudza.
Mushandisi weWindows kubasa.
Mutsva weLinux mushandisi kumba, ndinovimba kwenguva yakareba.
Ndeipi hombe supine nzombe :)
Kana iwe usina internet haugone kuwana chero chinhu chiri online, usasanganise nevanhu vane zvinhu zvisina musoro, ndatenda ...
Uye kune chimwe chinhu: Iyi bvunzo haina musoro.
Kana ini ndikaisa Windows mushure memwedzi wekushandisa, inenge izere nemavhairasi, ichinonoka, hard drive yakavharika, nezvimwe ... Mune chero Linux distro, mwedzi wekushandisa wakaita sezuva rekutanga.
Iwe haugone kuenzanisa mamiriro acho, chinhu chakakosha ndiyo KERNEL uye mune iyo Linux 100% inodarika chero maWindows.
Uye ivo havana kukosha zvisina maturo senge: MuLinux hamuna mitambo, muLinux handikwanise kuita hofisi basa, zvese izvi zvikonzero zvisina kujeka zvekuenderera nezvakajairwa, nekuti vashoma chete muzana yevagari vanokurudzirwa kana kuda kuyedza zvakanaka uye zvinhu zvitsva, zvimwe zvese zvinosanganiswa nefashoni, kunyangwe kubhadhara marezinesi asina musoro, kuzvisunga semakwai kuti achekere zvakanaka :)
Kana iwe uri mushandisi weLinux uine isingasvike mwedzi mitatu yechiitiko chaicho chekushandisa, unogona kupa maonero ako, zvikasadaro kwete zvakawanda. Mune yangu nyaya, makore akati wandei ndichiedza zvese, mushandisi akavimbika weUbuntu uye anoda rusununguko, kwaziso
Ndiri ini akadaro
inosunga semakwai kuti aveurwa zvakanaka
Unorova panzvimbo, iWindows hahahahaha
Chii chinonzi Ubuntu? Hahaha
Ndine muunganidzwa wemavhairasi, Trojans, logic mabhomba, makonye mufaira inonzi "VIRUS COLLECTION" iri pachikamu changu "H", ndiri kushandisa Windows uye haina hutachiona nechero ipi.
Iyo se7en inoenderera nekukurumidza sezuva rekutanga (mwedzi miviri), zvakafanana zvaive neiyo XP (makore matatu), pane angangoita maawa gumi nemasere pazuva.
Zvakanaka, isu tinoshandisa iko kutaura, mavhidhiyo, mimhanzi, hofisi otomatiki, kugadzirisa (vhidhiyo - mimhanzi), autocad, photoshop, nhamba spss, stat, industrial simulator, loquendo, mitambo, ares, atube, kugadzirisa USB HHD, zvinoshandiswa, nezvimwe. .
Komputa yangu inoshandiswa neni nemhuri yangu, tinozvipa segonzo paPentium D yangu ine 1GB yegondohwe uye hatina kana matambudziko.
Ini handizive kuti vamwe vane sei matambudziko aya nekuhwina, zvinofanirwa kunge zviri nekuti ivo havazive mashandisiro eOS.
intruder gadza chero Linux distro, enzanisa zvakakomba uye wobva wataura, panguva iyoyo Beeeeeee, Beeeeee, senge ese maWindows makwai :)
@Ecapool: Makwai hongu claaaaaaaaaaro, kana ndikatenga sony lcd tv, ndiri sony hwai, kana ndikatenga Samsung kamera ndiri Samsung gwai, kana ndikatenga HP printer ndiri HP gwai.
mm ... distro? Linux? Zvakanaka, iwe unokurudzira Linux, asi chokwadi ndechekuti ini kana ani zvake mumhuri yangu haadi kutambisa nguva.
Beeeeee, beeeeeee, beeeeeeee, hahahahaha
Kutanga kubva pakutanga ini ndinokurudzira Linux Mint, Kubuntu kana Ubuntu.
Zvekurara kwemavara, ini Ubuntu Forewer :)
Ndakaedza akasiyana OS kugoverwa, ini handisi muongorori kana chero chinhu chakadai, sevazhinji veavo vanotaura pano, ini ndiri mushandisi wekumba, tinogona kutaura kuti ndingangoda kutaura kuti pane parizvino midziyo yezvinhu -ndiregerere yezwi kana isina kururamisa- yakagadzirirwa chete iyo system inouya neiyo vista kana 7 Ini ndoda kuisa Xp yakaoma kwazvo uye kubva ipapo kuisa linux kana ingwe kukanganwa haina kuziva yakawanda ye Hardware yeVaio zvakadaro . Ini ndakaisa linux pane yangu yakamira pc kanoverengeka kubva mandriva kune avo vanoteedzera Vista kana XP interface haina kuodza moyo asi kana zvikaganhurira sevashandisi vekumba ini ndajaira kudhonza nekudonhedza pakati pezvirongwa kune inoyevedza interface chimwe chinhu chavanoregeredza ndiyo iyo Too zvakawanda aesthetics ini ndingati iro rakavhurika hofisi iri kure nehofisi yeMicrosoft munguva pfupi yapfuura uye munguva pfupi yapfuura kudhirowa muoffoffice kunogona kupfuura kumahombekombe kwepeji pasina kuturika chimwe chinhu chakanaka icho linusx yakaunza iwo matabhu ayo paanga asati ari mumawindo uye akasiyana mafomu vaive vakanyanya kunaka kupfuura zvandakaona, zvinorwadza kuti havana kuishandisa zvakanyanya, vakagara ipapo uye chero munhu akaigadziridza, microsot kumuudza kuti vanoba chero, asi ivo pamwe chete neFirefox vakakurudzira chimwe chinhu chitsva mukati meiyo mushandisi interface, inoshanda 10.10, kana ivo vanowedzera mamwe mabhatani kune bar bar kubva kuhofisi kuenda kune mazhinji ezvirongwa zvingave zvakanaka chimwe chinhu icho windows chakarasikirwa neyekutanga kutanga yekupedzisira kushanda kwete Inofanirwa kupatsanurwa kubva kuneyekunaka uye mashandiro acho anofanirwa kuve anoshanda (pragmatic) kumushandisi wandinoverenga kakawanda kuti mumawindows haugone kuita chinhu chakadai mulinux kana asi ndiani anochishandisa kudzika kwakanyanya kwazviri kuita hauna kugumira izvo izvo mushandisi atova nazvo pamusoro akati windows haina kuchinja zvakanyanya uye ichokwadi asi inoshanda, inoshanda uye inonzwisisika, mushandisi wekupedzisira anobva kumba uye izvo zvinofanirwa kugadziriswa kune linux ndatenda
Pindura kune aririeri
Strange Dimension akadaro
Kuverenga iwo ese ane rusaruro uye asina zvaakataura, sezvo ini ndichireva kune aya maviri masisitimu anoshamisa, chokwadi ndechekuti ini ndinotenda kuti chero sisitimu inogona kuve yakanaka, sezvakataurwa na "jose" mune chirevo chandakaita ipapo. ok ... ndinonzwisisa kuti mazwi angu haachinje nyika, chii c. Asi chaizvo, iwe unofanirwa kunzwa kunyara uye kunyangwe kufunga zvishoma zvishoma. Ndine Vista Home premium uye chokwadi ndechekuti handina chero dambudziko rekuenderana, zvese zvinoenderana nekuti unoda kuti zvishande sei, zvinoenderana nekuti wakaisa shiti yakawanda sei pane hard drive. Ini handizive Linux uye ini ndaigona kutaura kuti uri super novice muUbuntu interface (asi izvo zvinogona kugadziriswa); D. Panguva ino ndiri kurodha pasi yazvino vhezheni iri 9.10 koala, ndigadzirise kana ndiri kukanganisa. asi ami mambure andinoda kuyedza, uye kana ubuntu hwakanaka pamwe neW7.
ikozvino ndine mubvunzo nezve kuburitsa mafaera ku ubuntu: chii chinoitika kumafaira, anotamiswa, akopihwa, kana ini ndinongofanira kuarekodha zvakare ndichishandisa iyo Ubuntu chikuva?
Pindura Ku Strange Dimension
Nenzira yandakanganwa kutaura hunhu hwemakumbo angu hehe.
Ndine acer aspire 5715-4543
Dhiviri musimboti 1.86 GHZ
368 MB ye mobile intel accelerator X3100 iyo mumaonero angu intel inoshanda zvishoma mune izvo mhando yezvinhu):
uye 160 GB yeHD (hard disk)
Iwe unofunga zvingave zvakanaka here kana ndikaisa Ubuntu pane yangu desktop desktop?
Ndine GT3074m gedhi
ine hunyambiri hwepakati asi izvi zvishoma zvishoma kupfuura 1.6 GHZ
ine 400 GB yeH HD…. rakakura kwazvo kwete? yekomputa inotanga ichi chinzvimbo ne1 GB yegondohwe ¬¬
Kuti kana ndikawira zvakaipa.
Ndingafarire kana iwe ukandikurudzira mune iyo komputa yekuisa ino yakanaka system
Hei iwe wakadii, poindi ndiko kuguma kwauinako, kunopfupisa zvese, ndakazvitarisa zvese, ikozvino ndinoshanda neubuntu jaunty uye nemaonero ekupedzisira, ini ndine zvese nekuti ini ndinoshandisa pc yezvinangwa zvakasiyana, ndinowanzoishandisa mu ubuntu, asi nekuti ndine redhiyo yandinoshandisa kuona, handisi kuti mu ubuntu hazvigone kuitwa, chete kuti ini ndinofarira kuchengeta zvese zvine chekuita neredhiyo mu Window $ uye zvimwe zvese mu ubuntu, izvi imhaka yekuti kunyangwe pakutanga kwewindows $ Haisi kunonoka kudaro, ndikangotakura mashoma mapurogiramu inononoka zvakanyanya, pachinzvimbo muUbuntu ndakatakura mapurogiramu mazhinji iwe unotoziva nezve "chekarlos" xD uye kunyangwe paine mumwe munhu akataura kuti vakaita iyo inodzidza nevashandisi vepakombiyuta uye yemakomputa michina kumba, nekuti ini ndinofunga ndiri muenzaniso wakajeka wekuti kana uchinge watarisa chero linux distro, jamaz inoda kudzokera ku windows $, uye zvakanaka izvo zvino zvinoitika kwandiri ndezvekuti pese pandinopinda windows $ Ndiri kuda kudzima kuti ndipinde linux xD, zvese nharaunda uye nekunonoka kwayo kuita windows $ lu Ego yenguva inonetesa xD.
Pindura kuna Eversore
Zvakanaka pane kutaurwa kwemawindo 7 uye ubunto. Iko kutove kubunto iro rine desktop yakanaka kwazvo uye rinoshanda, riri sekuti ndiani anoti ndiro rinokwikwidza newindo 7. Edza uye uchaona kuti rine fanano na7 chete kungoti ini ndinoshandisa ubunto 9.10 nekuti ini ndinoda kuti Zviri nyore sei, ndiri kudzidza kuishandisa, uye haina kumbobvira yakundikana kana kutangazve pamakumbo angu. kune matunhu mazhinji ayo zvichienderana nezvinodiwa zvavanogona kushandisa. Pamusoro pezvo, maLinux masystem haashandise madhiraivha nekuti iwo atove akanaka uye asiri mumahwindo uye kuamisa iwo, idambudziko ripi ravanopa?
Kana mumwe munhu achida kundikurudzira kuti windows iri nani pane linux, mhinduro haina mazwi, ini ndaishandisa windows kwenguva yakareba nekuti hapana chimwe chinhu chandakaziva, asi ikozvino zvandinoziva chimwe chinhu, Microsoft haichazooni bvudzi rangu zvakare, kutodarika kuzvipa.
John Bolter akadaro
MuMexico, Ubuntu haibhadhari. Windows 7 inodhura madhora mazana maviri.
IWindows 7 inouya neHofisi here?
Ini ndaisaziva izvozvo ... nekuti Hofisi inotengeswa zvakasiyana uye inodhura nezve 380USD.
Unogona here kunyatso tarisa DVD ine Windows usina kutenga iyo codec?
Kuisa scanner yangu, muUbuntu ndaifanira kungoibatanidza. MuWindows 7 ndaifanirwa kurodha pasi Megabytes mazana manomwe negumi kubva pawebhusaiti yeHP ...
Yangu Ubuntu inomhanyisa inoyevedza graphical sisitimu ina yematafura iyo inogona kuoneka yakarongedzwa kune matatu-mativi cube, iyo inoita kuti windows ive sebubblegum kuburikidza neyangu nVidia kadhi. Windows 7, sisitimu yacho yakaipa kwazvo ine desktop imwechete uye haina kuomarara uye haina kukurumidza seUbuntu.
Izvo hazvina kana kukosha kuita kuenzanisa ...
Pindura Juan Bolter
Wakamboona hutachiona hweUbuntu?
Nekuti ini handi…
Wakamboona hutachiona hwemahwindo?
Kosita Rika akadaro
Ini ndanga ndasarudza KUSUNGAMIRIRA KWEMAWINDI ... NEI? nekuda kwekuti software yacho rave bhizimusi rezvemamirioni, uye kufunga kwakadzama kubiridzira ibara muhana yangu, zvese ZVINHU zvinogona kuwanikwa neayo serial serial, ini ndine Mac bhuku pro, haina chaanoda, apuro inokupa zvese Zvinenge zvese software, kwete Windows ... ese ari muedzo, kunyangwe paine akawanda akasununguka, iri mubvunzo yehana ini ndinofunga ... ndosaka ndakasarudza UBUNTU 9.10 zviri nyore kwazvo uye zvakagadziridzwa, uye chinhu chakanakisa zvese zvaunoshandisa mahara. uye hana yangu yakachena! !!!!
Pindura Costa Rica
Manuel Antonio akadaro
Ini ndakaisa Ubuntu pane angu windows 7 ini ndawana iyi Link http://pcexpertos.com/2010/01/instalar-ubuntu-910-con-windows-7.html uye ini ndinoona zviri nyore kwazvo kuzviita, pandinenge ndichida, ndinongo chinja iyo system pandinotangazve pc yangu pasina matambudziko akawanda ...
Pindura Manuel Antonio
Izvo zvisina kutaurwa ndezvekuti kana iwe ukaisa Ubuntu iwe zvakare unoisa anenge ese anodikanwa mafomu ekuti utange kushanda. Hofisi suite, compressors, foto retouching, pakureba kwakaenzana neyavo vezvokutengeserana, uye kunyange kuvapfuura iwe kana uchinge waziva kuzvibata. Kana mumawindows isu tichiisa zvese zvinoshandiswa nehunhu zvinounza, isu taitozoona kukundwa mukuita uye bhuti sezvo zvichitora mukana wakanyanya. Zvakare, iyo windows faira sisitimu ingori nyonganiso uye inoda kugadziriswa kuti udzivise kupatsanuka kunorema uye kuora kana iwe uri kugara uchishanda nezviuru zvemafaira, uchiramba uchidzima uye uchigadzira. Uye kana tikaramba tichitaura nezve zvakanakira linux pamusoro windows ... Ini ndaizoneta nekunyora.
Mhoro mumba mangu mune makomputa maviri, rimwe riine mahwindo 2 uye rimwe riine ubuntu, ndaifanirwa kutenga komputa nekuti musikana wangu haadi linux, ndichavenga sei mahwindo andakashandisa mari pane imwe komputa kuti ndisashandise, ubuntu ndiyo iri nyore kushandisa ndinofunga nezvese linux zvakanditora semwedzi yakati wandei kuti ndione mashandiro azvinoita nekuti zvakasiyana zvakanyanya nemahwindo asi kana iwe wawana hang yacho yacho haudi imwe, kwaziso
Vadiwa vadikani, haisi iyo chinangwa changu kukakavara asi haugone kuenzanisa kure neUbuntu neWindows 7. Ndine urombo nekukunetsa asi kunyangwe kuenzanisa hazviite. Windows 7 iri pamusoro zvakanyanya kana zvasvika pakushandisa, zvinova izvo zviri izvo zvinoda mushandisi wekupedzisira. Kunyangwe Ubuntu iine huwandu hukuru hwema pre-akaiswa manyorerwo uye kuisa, hapana ari kure akafanana nemapakeji ekutengesa atinawo muWindows 7. Ehe, Ubuntu yakagadzikana, yakavimbika uye yemahara; asi zvine chekuita neyekupedzisira mhando yechigadzirwa, zvinosiya zvakawanda zvekuda, kunyanya graphic nharaunda. Uyu murombo uye asina kurongeka, zvinondiyeuchidza nezveWindows 3.11 uye mashandisirwo acho zvakafanana. Ivo vanoshaya utsanana uye mhando ruzivo. Ehezve, nekufamba kwenguva (makore) inogona kuenderana uye pamwe kutodarika Windows 7; kunyanya kana iwe usingavimbe nemirairo yakadzika-nhanho kubva kunyaradzo; asi izvi hazvisizvo nhasi. Manyepo ekuti Windows 7 haina kugadzikana, pamwe kubva padanho rekutarisa Ubuntu rakadzikama, asi izvozvo zvoga hazviite zvirinani mashandiro. Kana chiri chokwadi kuti chakanakira maseva, nekuti kubatana kwese nemushandisi hakudiwe, ndinovimba izvi zvinoshanda segwara kune avo vanoedzwa kutama kubva kuWindows 7 kuenda kuUbuntu, usazviite kunze kwekunge iwe uchida kushandisa chigadzirwa chichiri mbishi. Rombo.
Ubuntu? Chii ichocho?
Linux yakafanana neiye wechidiki mutambi uyo anga achitaura hupenyu hwake hwese kuti akatosvika, kuti achaputika, asi haamboiti. Uye mushure memakumi maviri emakore, anovimbisa mutambi wemitambo Linux akura.
Ivo vari kurasikirwa iyo inonakidza kosi yekuenzanisa.
Akawanda maGnu-Linux masystem (hapana chete ubuntu) anoshanda zvakanyanya kana akaenzana new windows.
Chii chakakosha chaizvo uzivi hweshure kweOS imwe neimwe. Ipo Windows iine pfungwa yemusika, Ubuntu ine pfungwa dzevanhu. Ndokumbirawo kuti muverenge zvinorehwa Mahara Software, mahara sekusununguka kwete sedoro remahara. Mune mamwe mazwi, Gnu-Linux OS haisi yemahara chete, ndeye mahara! tarisai http://www.fsf.org
Usarasikirwa nevakomana, nhaurirano dzenyu dzinoita sedzisiri panzvimbo sekushamisika kana (kufungidzira kutaura) mota nyowani-inofambiswa nezuva inosvika 100km / h sekondi pamberi kana mushure meiyo itsva Ferrari…. ndiani ane hanya!!! imotokari yezuva !!!
Chinhu chakakosha haisi iyo yekumhanyisa asi huzivi hunomiririrwa nechigadzirwa chimwe nechimwe uye chatinozvipira nacho (kunyangwe tichizviziva kana kuti kwete) kana tichiishandisa
vanhu fani ndaifunga kuti mumwe munhu achazvitaura asi hapana akacherekedza.! iyo posvo inofanidza ubuntu 8.10 (yekare distro kare) ne win 7 ichangoburitswa! . Ini ndinoshamisika kuti nei isingaenzanise ubuntu 10.04 ne win7 kana ubuntu 9.10 izvo zvisingaite kana kuzvipa zita Zviripachena, kana ndikaenzanisa Ubuntu hwekare neimwe nyowani uye nekukwenenzverwa nezvikanganiso izvo zvaanga akatakura nekuona, ichakunda chechipiri. Ndinovimba mumwe munhu anoita enzaniso ne10.04. Ndiri kushandisa beta 2 uye inomhanya nekukurumidza kupfuura 9.10 .. uye ndiko kutaura zvakawanda, handiti? rombo rakanaka!
Zvinoshamisa mashandisiro anoita chinyorwa ichi kuburitsa makomendi GUMI NEMA GUMI mushure mekuburitswa… LXA: Makorokoto
Ndatenda chaizvo nitsuga :)
Windows 7 uye Ubuntu akadaro
Ndakaona vhidhiyo ... uye zvakanaka ini ndine ese mashandiro masystem pane pc uye chaizvo vese vane zvayakanakira nezvayakaipira ... Windows yakagadzikana uye inogamuchira mimwe mitambo kupfuura Ubuntu ... asi Ubuntu inoirova mumhedzisiro uye resndimiendo pamwe nekugona uye pasina hutachiona ...
Asi kana vakauya kuzoona ... "Dai Ubuntu iine rutsigiro rwemitambo ingadai iri yakanakisa" uye nei vasingataure izvi: "Windows ingadai iri nani dai isina hutachiona uye iine zvimwe zvinokonzeresa"
Kutendeseka, ndinonamira nemawindows 7, kunyangwe zvese ... zvakanaka, zvakagadzikana uye chinongedzo hachina kushatisa kana ... zvakanaka.
Kupedzisa ... dai ubuntu hwaive hwakanakisa, nekuti vazhinji vanoshandisa windows uye iyo ubuntu yakasununguka kurodha pasi ... dai ubuntu hwaive hwakakurumbira hwaizove chinangwa chebazi rose remavhairasi paInternet ...
Pindura Windows 7 uye Ubuntu
Ini ndakarohwa neakakosha nyonganiso inodzokororwa mukati mekutumira.
Vanoti Windows iri nani pane Linux nekuda kwezvirongwa. Pane chikuru kusanzwisisa pano. Ose maWindows neLinux ari kushanda masystem, iwo mapurogiramu anomhanya pane iwo anoshanda masisitimu chimwewo chinhu. Mune ino posvo izvo zvinofanirwa kufananidzwa ndiwo masisitimu anoshanda, KWETE zvirongwa.
Zvimwe chete zvandinotaura kune avo vanodzivirira Linux vachiti izvo zvirongwa zvakasununguka uye zvemahara.
Nekuremekedza kwese kwakakodzera, asi zvinoita seni kuti izvo zvinofanirwa kuiswa mune imwe posvo, kana zvirinani kupatsanura kuenzanisa kwemaitiro anoshanda kubva muzvirongwa.
Kunyangwe hazvo posvo yacho yese inosetsa, ini ndinoda kuona kuti vanorovana sei, kakawanda nechikonzero, vamwe vane moyo.
mhoro, Ubuntu hwakashata, ndosaka ndichishandisa mint 8 kana kubuntu, kunyange ini ndichibvuma kuti ini munguva pfupi yapfuura ndakaedza iyo windo7 uye ndakashamisika.
Kazhinji uye ndapota usazvitore nenzira isiri iyo asi ndinoda kubvuma kuti "muLinux inoyamwa" ndakaedza kubatanidza wifi-usb, uye ndakatadza ndaifanira kurega pakupedzisira, rubatsiro diki randakawana "chakakomba" chaive muChirungu neChina, nei ndichiishandisa? Zvakanaka, pane chimwe chinhu chiri nani pamusika? Kune avo vasina kuyedza chero linux distro munguva pfupi yapfuura, ini ndinoti, makore mashoma apfuura kune linux, kunyange ichiri shit, yakavandudza zvakanyanya, uye mumaonero angu iri nani pane windows mune chinenge zvese.
Ini, sevazhinji vashandisi, ndinobva kumahombekombe emhepo, ndiko kuti, ndinozviziva uye zvakanaka, saka handizive kuti vanhu vanoti mafafitera akakwana kwavari vanogona kuverengerwa kunze uko, ivo vanozoita sevamwe vese kubva kunguva dzose kune zvakaipa ...
Kunyangwe ini ndichiziva kuti linux ichiri shit, ndinokurudzira munhu wese kuti ayedze, kuti kana mwedzi uchikwana, usakanganwa makore awanga uri mumahwindo, edza iwo nechido kwemwedzi wega, uine kufarira kwakafanana neapo iwe wakatanga mumawindo, uye ndinofunga ichavhura maziso ako zvishoma.
Chekupedzisira, maita basa, maita basa, maita basa, kune vese avo vanoita kuti "Linux muhuwandu" zvigoneke, ndichagara ndichinzwa kuva nechikwereti kwauri.
Mhoro Bitches akadaro
Ini ndinofanira kudzidza kutora iyo x_x koni kunze kweiyo Ubuntu ndiyo yakatemwa: D ndinoinamata…. Kunyangwe ndaizoda kuyedza debian, ini handidi kusiya ubuntu * 3 * haina kumbondipa kukanganisa ... (kusiyana ne xp) kunyangwe ndiri newbie mune iyi ye linux, ndinogona kuita zvese zvandakaita zvakajairika uye zvirinani mashandiro pcc yangu…. ikozvino ndichaedza mangaka linux kuti ndione kuti zviri sei; D ... (Ndinoziva ... Ndiri geek-japo D :) kwaziso 8D
Pindura Hi Hi Bitches
Pasina mubvunzo kutaura, Kubuntu ishiti x3 mu vdd ini handidi iyo KDE nharaunda ._. (zvichiri nani pane winbug $ xD)
Ini ndinoda vanhu vanoti mitambo haishande mu linux, tsanangura "mu linux iyo mitambo yakagadzirirwa Windows haishande" zvakafanana nekutaura kuti play station yakaipa nekuti haugone kuisa sega cassette mairi, nevanhu funga saka windows rine ramangwana rakavimbiswa, ramba uchishandisa windows $ mushure mekuti zvese kusununguka hachisi chisungo.
linux iri nani pane windows zvirokwazvo ikozvino windows iri nyore kushandisa linux iwe une mamwe anoyevedza makadhi ekuita zvinhu zvakapusa ini ndinoshandisa linux uye ndinoida asi ini handikurudzire kune chero munhu asingade kudzidza kuishandisa. Paunenge iwe uchinge waziva kuti ungashandise sei, iko kubwinya, panguva iyi kwakashata kupfuura kunyura. Zvese zvine chekuita nekutsunga kwaunomuisa kuti adzidze kushandisa anonyanya kuita sisitimu yekushandisa iyo inotora mukana wezvakawanda zviwanikwa kupfuura windows ... asi windows uye yako inotevera inotevera kubvuma yatove yakaiswa yatove nyore uye ikozvino neinomwe iyo inofamba zvakanaka chaizvo zvichiri nyore kune akajairika mushandisi windows 7 kuzara kune avo vanoda kuziva chimwe chinhu nezve pc uye nekushandisa zvirinani komputa yavo uye nekuita zvinhu zvavaifunga kuti havagone kudzidza linux hauzombozvidemba.
Ubuntu inovhura maitiro mazhinji nekutadza kubatsira nekuenderana uye kuita kuti hupenyu huve nyore kumushandisi, ivo vari kuyedzawo yazvino Windows OS neimwe kubva kuUbuntu gore rakapfuura, zvakashata, Lucid Lynx anotendeuka pakati peiyo [kubva GRUB ne SSD inotora anenge masekondi mapfumbamwe nezvose uye compiz]
unoziva here kuisa .deb?
2_pa gadza package
an .exe neWine:
kuverenga uko kutove ne .deb kana iyo .exe iri mumaoko ako, kubva kune software centre iri nyore kwazvo
Sezvo ini ndinonzwisisa iyo faira yekumhanyisa kumhanya kunoenderana nemafomati eiyo hard drive, ndiudze kana zvisiri. Saka zvingave zvisina musoro kuzvienzanisa munzvimbo idzi sezvo Linux ichigona kuisa mhando dzakasiyana dzemafomu ekuparadzanisa zvinoenderana nezvaunoda.
Mhoro chikamu chekutanga windows, pane dambudziko hombe nekuti ubuntu zvinotora nguva yakareba kuti zvitakure asi paunotanga chikamu chakagadzirira kushandiswa pachinzvimbo windows unofanirwa kumirira mafaera ese kuti utakure mushure mekunge watanga chikamu uchifunga kuti windows zvaizoita tora kanopfuura kaviri kureba kutanga pane ubuntu
Iko kuenzanisa kwakanaka asi ... ini ndinofunga hazvina basa kuti ndiani anorova ani kweani "masekondi" mangani. Ini ndinoda 7 interface zviri nani, ndinofunga inzira yekutsiva iko kukanganisa kwakaonekwa. Ubuntu, kunyangwe ndichiiona yakaoma (nekuti basa rega rega rakandiomera) ini ndinorifarira kuti igadzikane uyezve nekusavapo kwemavhairasi! Ini handizive zvakawanda nezve izvo ... Ini ndiri mumwe wevasikana avo vanong "chat" hehehe ini ndinoshandisa ese masystem. 7 nekuti ini ndinoda chimiro chayo uye zviri nyore kune iyo inogara yakajairwa, uye Ubuntu ndiyo inokodzera ini zvakanyanya.
Zano: Edza zvese! uye tora zvaunofunga.
Uku kuenzanisa kunogara kusina kuenzana uye kuchida windows nekuti masisitimu anoshanda haana kuiswa zvakafanana, windows 7 yakaiswa ine mashoma mashandisirwo, kune rimwe divi, chero kugoverwa kweLinux, kunyangwe zviite kushoma sei, kune akawanda maficha akabatanidzwa, ndinoda kuona kuenzaniswa kwelinux inopikisana nema windows Mumamiriro akafanana neakakwana masystem, mashoma windows ne Microsoft office suite yakaiswa, chirongwa cheCD kopi, mupepeti wemifananidzo, mutumwa, yako multimedia player, p2p mutengi uye antivirus kuti uone kana iwe unorara paunoridza ngonono, ndine makomputa matsva ane core2duo uye windows 7 ayo anogona kutora kusvika pamaminitsi makumi matatu kuratidza desktop yekukodha izvi zvinoshandiswa kana uchitanga uye ini ndine pentium 30 ine ubuntu 4 ine mafomu mazhinji uye inochengetedza nguva dze uku kuenzanisa.
Pindura kune Animal_Virtual
iyo ubunti 10.04 inokurumidza kupfuura iyo windows 7 kubhowa uye zvakare mune pentium 3 inoenda chaizvo.
Iyi data inoita senge isinganzwisisike kwandiri, panofanirwa kunge paine chakakanganisika, ini ndinoisa ubuntu pane yangu laptop ine inobviswa USB diski mumaminitsi maviri nehafu kusanganisira kupatsanura uye kugadzirwa kweakaundi account nezvose zvakagadzirira kushandisa uye izvo zvinoshayikwa zvakafanana iwe kana uchiishandisa zvakanaka (mp2, flash, vhidhiyo codecs, mitauro zvaunofarira, nezvimwewo). Kuisa windows 3 Ini ndoda maminetsi makumi matatu kubva paDVD (uye ndiyo chete nzira yepamutemo yekuzviita) uye ipapo ndinofanira kuisa madhiraivha ayo WUpdate asingaisire ini. Ubuntu inotanga ini ndisina masekondi gumi neshanu akagadzirira kushandisa, nepo windows 7 isingabvise masekondi makumi mana (kana iwe ukaisa mapurogiramu anodiwa kubvira pakutanga haisvike masekondi makumi matatu asi nguva yekukwirisa pese paunotanga yakakura) uye izvo hazvisi kuverenga kuti zvinotora nguva yakareba sei kurongedza desktop mushure meizvozvo.
Unogona kundidaidza kuti linux fanboy kana chero chaunofunga, Windows inogona kunge iri yekutengesa chaizvo chigadzirwa ine zvakawanda zvinobuda, asi maererano nehunhu iri pasi pazasi peiyo Linux distro yakadai seUbuntu, debian kana fedora.
Ndingadai ndakavafarira kuti vaenzanise nedebian, ini ndaishandisa uye inokurumidza kupfuura ubuntu kunyangwe kana iwe usingazive zvakanaka unowana zvinhu zvausingazive kugadzirisa, zvinhu zvisingaitike neUbuntu ( linux yevanhu vakataura sirogani yandinofunga kuti ndinorangarira).
Vakandiudza kuti Ubuntu yanga iri nani asi sezvo ndinayo ini handioni musiyano mukuru neWindows 7 saka inenge yakafanana chete neyemahara, inova yakanaka kwazvo. uye pasina hutachiona.
Asi haigone kutambwa pane linux senge pamahwindo. DX9.
Ndanga ndiri "linuxero" kwemakore matatu chete, asi zvese izvo zvinhu zvaunotaura ndezvekutanga, zvese mumawindo uye mune linux. Ehe, izvi zvese zviri nyore mu linux. Ubuntu inoratidzika kwazvo uye yakapusa distro kutanga. Nenzira, sezvo Ubuntu 3 (iyo inobuda mukuenzanisa) 8.10 vatobuda kare. Ini ndaizoratidza 4. Kune vanoona hwindo, pane zvinhu izvo windows zvisina, semuenzaniso haisi yevashandisi vakawanda, ndiko kuti, kusiya musangano wakavhurika uye uchimhanya uchishandisa imwe nguva yemushandisi; Mavhairasi zvakare chinetso, sezvo yakanaka antivirus inodzora muchina zvakanyanya; yakavhurwa sosi iri kuwanda zuva nezuva paInternet, iri kuramba ichiwedzera kuwanda; Kune matambudziko mazhinji andisingafunge kuti windows achagadzirisa munguva pfupi iri kutevera.
pane zvinhu izvo windows zvisina, semuenzaniso haisi yekushandisa-vashoma, ndiko kuti, kusiya musangano wakavhurika uye uchimhanya uku uchishandisa mumwe mushandisi chikamu; Mavhairasi zvakare chinetso, sezvo yakanaka antivirus inodzora muchina zvakanyanya; yakavhurwa sosi iri kuwanda zuva nezuva paInternet, iri kuramba ichiwedzera kuwanda; Kune matambudziko mazhinji andisingafunge kuti windows achagadzirisa munguva pfupi iri kutevera.
Ini handisi pro-windows, chii chimwe, ini ndinongoshandisa ArchLinux yakawanda yenguva, uye, kudzivirira mumwe munhu kutora mukana weccaccision yemashoko ako, ini ndinokuudza kuti Windows ndeye yakazara-mushandisi-yakawanda uye yakawanda-tasking kubvira Windows 2000, uye inobvumira vashandisi vaviri kupinda mukati mukoni imwechete panguva imwe chete. Windows XP inodaidza izvi "kushandura mushandisi nekukurumidza." Uye zvakare, mavhairasi haazi dambudziko reWindows 7 (kunyangwe iyo nzira pfupi isiri kubatsira) kana Mac OS X kana Ubuntu, iri, kazhinji, dambudziko kune vashandisi. Hazvina mhosva kuti tambo yakasimba zvakadii, inongova isina kusimba sekubatana kwayo isina kusimba, uye kana mushandisi weUbuntu akarodha pasi .deb kubva kune isingazivikanwe sosi, uye, achiregeredza yambiro yekuchengetedza, nyora pasiwedhi yavo uye nekuisa iyo package, zvinonzwisisika kubatira hutachiona, kunyangwe kunaka kweiyo kernel kuchengeteka.
Ini ndashandisa windows 7 yegore rimwe munguva pfupi ichave rimwe gore kubva pandakachinjira kubuntu.
Iko kugutsikana uchishandisa anoshanda system hakuuyi kubva kuendesa makuru mafaera kune pendrive. Izvo zvinongokuponesa iwe imwe nguva uchiita aya mabasa, uye isu hatisi kazhinji kufunga patinoteedzera faira chimwe chinhu senge "dai yaive pa ubuntu ... zvaizoitwa pari zvino" Kwete, hapana munhu anofunga izvozvo. Nekudaro, kana iwe uri kushandisa Ubuntu uye iwe ukatenga USB kuti utarise DTT, iwe enda kune peji remugadziri uye woona kuti hapana madhiraivha eako anoshanda system, wobva watsvaga hupenyu hwako kurodhaira mutyairi, unoinyora iyo 1 awa, iwe unoriisa, rinoshanda asi iwe unonzwa kuti rinogona kushanda zvirinani zvirinani nekuti rakarembera zvakanyanya asi hei, zvirinani rinoshanda uye hauna kukanda mari iyoyo. Wobva wachinja iyo kernel vhezheni mune yekuvandudza uye iwe woona kuti iyo tdt haichakushandire iwe, iwe ukaedza kuibhadharisa uye inopa kukanganisa, uye kutsvaga kwehupenyu zvishoma zvakare unowana rimwe dunhu revanhu vane chinhu chakafanana sezvo iwe uye zvikazoitika kuti mutyairi haachashanda pane yazvino vhezheni uye imwe sarudzo ndeyekuti, kana iwe uri programmer uye uine nguva, shanda pane mutyairi wega.
Isuwo hatiite fananidzo pakati peWindows neLinux kana iwe uchidzoka kumba ne laptop yako woisa tarisa yako mu laptop. MuWindows 7 ndinorangarira kuti ndicho chega chiito chandaifanirwa kuita, plug mu monitor cable uye ikozvino muUbubtu mukuwedzera kubaya tambo ndinofanira kurova alt + f2, nyora "nvidia-masetingi", enda ku sikirini yekumisikidza chikamu, tinya pane kuona Monitor, sarudza iyo yakaonekwa uye uigadzirise kune yaunoda resolution. Ichiri chokwadi kuti pane kumwe kugadzirisa kuti uite izvozvo nekugadzirisa xorg.conf asi senguva dzose ndinofanira kuenda kunotsvaga chimwe chinhu chisipo uye ndiyo nguva.
Uye ndinofanira kutaura kuti neWindows 7 yanga iine zvibereko zvakanyanya, ikozvino neBuntu ndinoshandisa nguva yakawanda ndichimhanya nekuchigadzirisa pane kuita chaizvo zvandinofanira kunge ndichiita.
Ehezve, Linux ine yakawedzera kukosha, ndeye mahara uye ndinofara kwazvo nezvimwe zvakawanda zvinhu, senge inyaya yehutachiona uye nharaunda huru yevanhu vanoikomberedza nguva dzose vakagadzirira kubatsira. Asi zvese zvinopenya haisi goridhe. Ini ndinofunga kuti ini ndichagara ndichisuwa zvinhu kubva kuWindows uye zvakare kubva kuLinux.
Nenzira, hapana munhu anondiudza "tenga mac" nekuti ini ndinovenga ese maMac uye Apple.
Pindura kuna marius
@marius: Izvo "zvinosetsa" ... asi ini ndinofunga chaizvo imwe nzira kutenderera. Chekutanga pane zvese, ini ndinovenga kumirira. Kuteedzera iyo 15GB faira kubva kune imwe diski kuenda kune imwe muWindows kunotora maminetsi gumi nerimwe. Iko kushanda kumwe, paLinux, kunotora 11:3 maminetsi. hapana kuenzanisa. Mumawindo, ndakabaya yangu Nokia 30 kuburikidza neUSB kushandisa iyo tethering basa uye haina kushanda. Chokwadi, ndakanga ndisati ndambozviedza pamahwindo, uye ini ndakanga ndisina madhiraivha akaiswa. Ndakarasa CD nevatyairi, saka, pasina internet, zvakandifungira kuti nditangezve iyo Ubuntu yandaive ndaisa paPC iya ndobatanidza nharembozha. Ini ipapo ndakaona izvo zviri mukati mekadhi re SD, uye chiziviso chakandiudza kuti "Nokia XpressMusic 5800 yekuwana nzvimbo inowanikwa" Mabhatani maviri pane network network munzvimbo yekuzivisa uye ini ndaive ndakabatana.
MuWindows, ndinorangarira kuti zvaive zvisingaite kumhanyisa yekutarisa kunze kwekutangazve PC kana yanga isina kubatana pabhoti. Akazviziva, asi sezviri pachena aisakwanisa kuseta resolution yaizomushandira. Iyo nguva yandakaedza muUbuntu, mushure mekuibatanidza, System → Zvaunofarira → monitors, skrini 2 → Simba. Wakangwara.
Mukushandisa chaiko kweiyo inoshanda sisitimu Ubuntu inguva yakakura yekusevha nguva zhinji, iro dambudziko chete rekuti kugadzirwa kwangu kune vechidiki kushomeka kwekushandisa. Kugadziridza vhidhiyo mu KDEnlive, kunyangwe iine simba kwazvo, iri chaizvo… yekumashure-kutyora. Ndinosunungura nguva. Izvo zvakafanana nekugadzirisa mafoto muGIMP. GIMP ine simba kwazvo, uye ini ndakadzidza kuishandisa pamberi pe Photoshop, asi nePS ini ndinoita zvimwe chete mumatanho mashoma, kana neimwe nzira yakajeka. Chinhu chega linux chinoshaya kuti chibve pasi kutsigira kwechitatu-bato. Nharaunda haigoni kuita ZVESE pachayo. Kunyangwe ichiita rinoshamisa basa.
Ubuntu ichiri yakanaka toyi yekuchenesa komputa yako kubva kumavirusi. Ndiwo mahwindo musikana.
Ndiregerere, asi zvinoenderana nezvawataura, BEAT yakadyiwa naBill Gates, kwete Linux !!! Mhedziso yako nemhedzisiro yezvidzidzo zvakaita kunge kupesana kukuru kwandiri. Ndine WIN7 uye ndinovenga marezinesi, kunyoreswa uye zvinhu zvakanyanya zuva nezuva.
Rakareruka hwindo rine mavairasi nekuti iri inozivikanwa nzira, uye ndiani anoita mavhairasi mavhavha kuba ruzivo, makodhi, nezvimwe .. Linux? mmm kwete xq? Nekuti hapana munhu anofarira kubiridzira iyo inoshanda sisitimu kunyangwe iri yakanaka kwazvo .. muchidimbu, yakanyanya kushandiswa is window, yaive yekutanga sisitimu yekushandisa yawakashandisa pawakadzidza kubata hwindo rekombuta, handiti? mu cyber, muzvikoro pamativi ese hwindo rinotonga .. Ini handidi ubuntubu asi neniwo handizvishore ngativei mapfupi uye ngatirege kuvharika-pfungwa .. Handidi linux asi kana neni ndinozvidza, kwete nekuti ini handizvifarire ini ndichataura zvakaipa nezvake sezvinoitwa linuxeros .. uye kana hwindo rizere nemavhairasi, nei paine maantivirusi? Uye kana munhu achida hwindo uye asingakwanise kuritenga zviri pamutemo kune chii chinonzi piracy? Mu taringa vanokupa zvese zvinoshandiswa .. kana kuti vari kuzondiudza kuti vese vakatendeka uye kuti pavanotora pasi chirongwa chekuyedza chikapera vanozobhadhara x rezinesi? Ini ndinokahadzika zvakanyanya, zvakadaro .. windows uye linux vane yavo chinhu ..
Pindura kuna ezeqiiel
Ini ndinofunga iwe wakafananidza Windows neUbuntu nekuti ndiyo inonyanya kufarirwa uye inoshandiswa distro. Iko kuenzanisa hakunyatso kundiudza kuti ndechipi chiri nani (ini handishandise chero evaviri), asi ndinonyatsofunga kuti mushandisi ane hanya zvakanyanya nezve zvinhu zvisiri mukuenzanisa. Kwandiri, pane chinhu chimwe chete icho Windows inorova Linux zvisina hunhu; BACKWARD KUSANGANA. Pane shanduko kubva pane imwe vhezheni yeLinux kuenda kune imwe zvinoreva kuti hauna 100 x 100 vimbiso yekuti unogona kuenderera uchishandisa imwecheteyo chirongwa. Ini ndinofunga Linux yaizowana yakawanda manhamba kana pachinzvimbo chokuburitsa vhezheni nyowani mwedzi mitanhatu, maBhaibheri acho akanyatso kugadziriswa kwemakore maviri kana matatu. Uye kana pese pese panoburitswa vhezheni yemaibhurari esisitimu, zvinovimbiswa kuti zvirongwa zvakanyorwa neraibhurari yapfuura zvinogona kuramba zvichimhanya pasina matambudziko Chimwe chinhu chandisingadi zvachose kuda iyo internet kuisa iyo inoshanda sisitimu. Kupa muenzaniso isiri Linux, ngatitaurei nezveOpenSolaris: pasati paine shanduro mbiri SXCE yakauya paDVD uye OpenSolaris. Yekutanga yaisada internet yekubatanidza kuisa system nezvose zvinoshandiswa uye zvakatora maawa maviri zvichienderana nemuchina; Zviripachena iwe unogona kusiya iyo system kuisa uye kuzvipira iwe kune chimwe chinhu. Kune rimwe divi, neOpenSolaris iyo yekumisikidza iri kukurumidza, asi ipapo unofanirwa kubatana kune repamhepo repositi kuisa zvese uye pakupedzisira zvinotora nguva yakareba kuti system iiswe, nedambudziko rekuti kana iwe usina internet kubatana, saka haugone. Ini ndinotenda chaizvo kuti Windows inobudirira nekuda kwezvikonzero zvitatu izvi: 6- kumashure kuenderana, pamwe neasina kujairika kunze 2- Iyo yekumisikidza haibvi pane internet. 2- Iyo nguva iri pakati peshanduro yakarebesa uye izvi zvinoita kuti hupenyu huve nyore kune mapurogiramu.
Zviratidzo zvinonakidza, asi handifunge kuti chero munhu anozvitora kana achishandisa sisitimu yekushandisa.
Pindura kuna vdgg
Maonero angu ndeekuti panguva yekumhanyisa Windows 7 nechero antivirus iyo yakamisikidzwa inofanira kunge iine iyo kana isiri iyo system haina kunyatso kuchengeteka pasina kuita bvunzo ini ndinoziva kuti Uuntu anokunda, maxime mune yayo vhezheni 10.10 yakanaka mumaonero angu Ikoko hapana kuenzanisa kunoenderana sezvo chengetedzo inokosha.
kumwe kuyedzwa kwakakomba nehusimbe ,,, ndiani anokunda hahaha pasina mubvunzo madzishe ... ndatenda nekuteerera kwako
Pindura kuna joseph david
Ubuntu inofanirwa kuvandudza maficha ezvakawanda zvekushandisa, avo vatambi vanotyisa, kuoneka kwemafolda, nezvimwe.
Windows 7 inononoka asi ini ndanga ndine matambudziko neUbuntu kana iwe ukanyora kana kunama rairo kubva papeji kana kuisa yechitatu-bato software, mavhairasi anogona kuoneka anoita kuti mamwe mapurogiramu ashande zvakashata. Semuenzaniso, gadziridza vhezheni 10.4 kusvika 10.10 kubva ku terminal. Zvese zvakava zvisina kugadzikana kwandiri. Iyo photospot ndakaona iyo yakasvibira mifananidzo ini handina kuona mavhidhiyo emapeji. download vhezheni 10.10 kubva kune yepamutemo webhusaiti. uye pandinoyedza kuiisa, ndinowana dema skrini uye ndinofanira kutangazve ndinogara neyeUbuntu 10.4 vhezheni.Chinhu chakanakisa kungave kumira kurega kuita shanduro dzakawanda zvekuti vamwe vanoshanda pakombuta yangu uye vamwe havaiti. uye kusunungura yakagadzikana vhezheni uye kugadzirisa mabhugi pamusoro pemakore uye kusunungura vhezheni nyowani makore ese mashanu kana matanhatu. uye kuti shanduro dzekare dzinoramba dziine zvigadziriso. makore gumi kana gumi apfuura. senge xp ine inogadziridza kusvika 5. sezvinoita windows. Iyi nzira chete ingadai linux ichidarika windows.
Pindura kuna angeldon
Ini ndinofunga kuti ubuntu hunorova guindous (hahahahahahahahahahahaha)
Ubuntu iri nani uye yakagadzikana
Ini ndaive ne w7 kumba premium asi maelgues anga achishushikana, mumawindow sisitimu yakavharwa, mu ubuntu iwe unongopa iyo hwindo yekuvhara iyo inokanganisa kunyorera kana kuva ne desktop rako mune 3d chimwe chinhu icho mumawindows chausingakwanise uye chausingazokwanise ( jjajajajajajaja) funga nezvekuti nei vazhinji vanoshandisa windows vachingovhura internet uye vachibira facebook uye ivo vatove vashandisi vepakati, ha ini ndinotenda k ubuntu iri nani pane windows
Ini ndinotsigira ubuntu !!!
Pindura kune info
Hwindo WANODZIDZWA NEMAONESERI NDEUYE ICHAVE CHINONYANYA KUKOSHESA SENGUVA INO KUSVIKIRA KUSVIKA KWEMAWINDO ETSVA 8 YAVANOTI IYO ICHAVA KUNYANYA ASI IZVOZVI HANDIFUNGE VANOGONA KUKURUKURA MAITIRO EVANOMWE ANODZIDZA WEMAWINDI SEVHIKI NDIYO BEST WESE MUMWE NOMWE NDINOTAURA POE OWN EXPERIENCE
WIndows yakanaka chaizvo hongu ndinogara ne xp vamwe vanodya zviwanikwa senge zvekupenga "uye fart" uye ichokwadi zvavanotaura wedzerai antivirus kuona zvishoma anti-kuvhunduka uye anti-tangi »muchina unova hellish ngoro uye zuva rinotanga zvimwe zvinononoka, ubuntu zviri nyore kuishandisa zvine zvese »uye unogona kurodha pasi zvese zvaunoda kubva kuzvitoro, hazvidi madhiraivhi chero» zvakadaro kune mushandisi zvakajairika zviri nani linux ubuntu zero virus zero kukanganisa matambudziko uye yakawanda Yekutsigira pawebhu kugadzirisa chero kunetsekana.
Zvakanaka ... kana paine chimwe chinhu chandinovenga, ndivo vanhu vanofananidza chero hupenzi vasina kufunga nezvavanoita.
Kufunga izvi zvakateedzana zveyedzo ndezve wepakati desktop mushandisi ...
Ndiani heck ane hanya kuti ndeipi inoshanda system bhutsu nekukurumidza? kana muchidimbu, tinoibatidza kamwe chete pazuva (kana maviri zvachose) uye tobva taisiya ichimhanya kwemaawa masere akateedzana isu tichishanda / tichitamba ... chero zvingave zvinonakidza kuziva kuti OS yakaturikwa zvishoma mumaawa masere iwayo.
Ndiani ane hanya kana kuisirwa kwacho kuchitora maminetsi gumi kana zvakadaro? mumwe munhu anoisa 10 OS pazuva, asi iye haasi mushandisi wepakati, mushandisi wepakati anoiisa ka300 pagore zvakanyanya !!! ndiko kuti, muzana muzana, mutsauko wemaminitsi gumi ingori 1% yegore !!!
Chekupedzisira, ndinofunga kuti bvunzo dzakakosha chaizvo ndidzo dzekufambisa faira, zvakare hazvina kunaka kuenzanisa neuwandu (masekondi), kuti unzwisise chokwadi chaunofanira kutenga nezvikamu, nekuti hatizive kuti saizi yefaira inoshandiswa kuenzanisa, asi kana isu tichiziva kuti kuenzanisa kwacho kwakaringana zvakaenzana nehukuru hwefaira kana nhamba yemafaira.
Semuenzaniso, «mune mafaera madiki Ubuntu anotora 27.7 masekondi uye Windows 7 inotora masekondi 74.8»… chii chiri diki mafaera?… Hatizive, saka zvingave zvakanaka kutaura kuti… «mumafaira madiki Ubuntu iri 2.7 zvakapetwa"
zvakafanana kune mimwe mienzaniso
mukupedzisira, izvo zvinoita kuti script ishande ... "windows inokunda nekuti inozviita mumasekondi 410.9 uye ubuntu mumasekondi 464.46" ... zvinoita kunge musiyano mukuru, asi muchokwadi windows akazviita chete ka1.13 nekukurumidza
uye kune avo vanoti linux yakanyanya kuoma, zvingave zvakanaka kuyeuka kuti yaive nguvai yekutanga kubata mawindo ...
Zvakare, mukuyedzwa kwefaira vakaremadza cache cache ... hongu, nekuti mushandisi wepakati anobvisa iyo sarudzo kuti iratidzike nemamwe masisitimu anoshanda ... chii godend.
OK KUENDA VAKAGADZIRA MAITIRO KUFANANA ASI CHII CHINOITIKA NEZVINODIWA ZVINODZIDZISWA ZVINOKOSHA MAWINDOWS 7 IS 1.5 GB ZVAKAWANDA KUTI UBUNTU IS 512 THE MAXIMUM KUTI MAWINDOWS 7 ANOKUMBIRA NDI 2 GB UYE MAXIMUM EUBUNTU ANE 1 GB FUNGIDZIRA. VANOGADZIRA KUFANANA KWEMABUNTU NE 2 GB YEMAHARA RAMI ZVIMWE ZVISINGASHANDISE YAKAWANDA YEMAHARA MAXIMUM UNS 5 GB NEZVINOGONESESA PAKASHANDISWA 7 MABHUKU 7 GB ZVINO CHIMWE CHINOGONESA WINDOWS 7 YAKAKUMBIRA KUTI UYE PAMUSORO PEMAPROGRAMU ZVICHIRI IYO UBUNTU INOGADZANA NECHIKAMU CHEMAWINDOW XP NDIVO ANONYANYA KUSHANDISWA HANDISI KUTI NDEZVIITWA ZVESE ASI KANA VANOSHANDISWA KURI KUTI KWANGU VANOTYAIRA KANA VADUKU VAKADZI VAKADZI HAVABATIRI = (
Kuve nemawindows 7 inoyevedza inoshanda sisitimu uye linux iri nani izvozvi pane kwete SAAAAAAALLLLLGAN YEMAFUCK EUBUUUUNNNTU ndechimwe chinhu chandakaedza akawanda madhiri uye kunyangwe mac solaris uye imwe UBUTNU NDIYO FUCK yeMAC tsvaga iyo KDE desktop kwete iyo FUCKING GNOME shandisa linux mandriva kuti vazive zvakanaka.
-Ko nezve mutengo wemahwindo: iwe unofanirwa kufunga kuti inouya yakaiswa panguva yekutenga, kuitira kuti muchokwadi iri yemahara.
-Antivirus: MSE inoshanda zvakakwana, ndeye mahara uye haina kunetsa.
-Disk nzvimbo: zvine basa rei?
-Ini ndinofanira kuti, * chaizvo * kuti nema windows ndine ZVESE zvirongwa zvandiri kuda MAHARA uye LEGAL.
-Windows kuisirwa kudiki, ini ndichiri kutsvaga maitiro ekuisa zvirongwa muUbuntu izvo zvisiri .deb (zvakanaka, ndiri dhongi).
-Kupfuura: Ndine matambudziko asina kugadziriswa ekumisikidza ubuntu (kana mint) mumawindows7 sefaira rewindows (wubi…)
Pindura kune hoblap
Huye mutengo »zvinoenderana nemamiriro ehupfumi eumwe neumwe» nzvimbo zvakare »sezvo vazhinji vedu tisina michina mitsva kudaro uye nzvimbo iri» ZVINOKOSHA »Uye win7 mumwedzi mitatu yekushandisa yatodya ingangoita makumi maviri gb, kutsamwa yehurongwa hwekushandisa iine 3 gb diski ubunto kune rimwe divi, iine 20 gb yekuchengetedza »iyo yekufambisa yakanyanya kuwanda ine 60 yegondohwe chete uye ne5 mhz processor, chimwe chinhu chisingakwanisike kuzadzikiswa nekukunda 512 nezviwanikwa izvi, Ndakanga ndisina matambudziko kuiisa, ini ndinotora zvese ndisina kuisa chero madhiraivhu »CHINOSHAMISA!, Yakanaka yekuhwina 1000 ″ iyo inogovera zviwanikwa zviri nani kwazvo» zvirinani kupfuura xp »asi chokwadika ne7 mhz michina yakakwira neinosvika 7 gb yekurangarira gondohwe. uye hombe dhiraidhi dhidhiyo uye vhidhiyo, ini handitombo kukuudza. (Zvisinei, Windows muvengi wemakomputa pachawo, achivaita kuti asashande mune yega yega vhezheni »inyaya yekutengesa» nenyaya chete yekuti mutumwa anorema mazana maviri mb kungotaura chete jee »Kune avo vanoziva nezve programming.
zita rekare akadaro
Windows 7 Rezinesi: 0
License yeUbuntu: 8,5
Pindura kuti uchinje zita
Mario mendez akadaro
tarisa kuti mabharaki ari nyore anonetsa hupenyu.
80 muzana yemakomputa anoshandisa windows kune ayo anoratidzika interface
muma windows chero munhu anogona kuishandisa batanidza usb yekufamba kuteerera mimhanzi,
shanda hofisi yako mapakeji akanakisa kushandisa anofara uye ane hushamwari interface
kuti kana iwe ukaverenga mari windows kana ukaverenga mari uye yakawanda asi nhasi uno kurodhaunura mahara kubva ku taringa yakatomisikidzwa sezvayakatangira uye inobuda mahara zvakadaro isu tese tinoshandisa windows zvese zvakanangiswa pamahwindo.
ubuntu ndewevanhu vakapedza makore vachidzidza. Fungidzira kana ndikachinja kubva pawindows 7 kuenda kubuntu mukambani yangu, vashandi vangu havazomboziva zvekuita zvakaoma seOS iyoyo.
Uye chii chauchandipindura? Mahara kana zviri zvemahara, mahwindo etara yakaderera nezvose uye serial kana usina mari yekutenga mahara =.
Pindura kuna Mario Mendez
Hi Mario, ndine urombo kukuudza kuti iwe hauna pfungwa. Hapana mhosva, ndinopika. Ini ndashandisa linux mint kwenguva yakati, ikozvino mint 10, uye ruzivo rwangu rwakanakisa, handidi kudzokera kumahwindo kana kuseka. Mario, iwe unoti Ubuntu ndewevanhu vane ruzivo rwakawanda muOS, uye hachisi chokwadi, kubva pane zvangu ruzivo ndinokuudza kuti, zvirinani iyo yandinoshandisa linux mint, iri nyore kunzwisisa uye nyore kupfuura mahwindo. Kunyangwe sezvaunotaura, kana zvasvika pakubatanidza chimwe chinhu, ini ndinoisa mint uye kukanganwa, zvese zvinondiziva uye zvinoshanda zvakakwana kwandiri, purinda, wifi, maspika ..., zvakadaro Win 7, kekupedzisira nguva yandaive nayo , haina kuIziva haina kudhinda kana wifi, uye kuti vese vaive necd yavo nevatyairi, nekuti windows vakati vatyairi havaenderane kana kuti havachashandi, zvinonyadzisa sei nemahwindo, rarama kwenguva refu Linux Mint. Uye chero munhu anoti zvakaoma kana zvakaipa, anongoreva kunyepa.
yakapusa kwazvo, vanhu vanoshandisa windows nekuti michina mizhinji inouya nayo "vanoigadzirira zvirongwa" uye vanhu vakajaira "saka zvinoita kunge zviri nyore! uye zvakasiyana siyana zve linux masystem »zvinokanganisa vanhu» asi UBUNTU »yakafanana zvikuru nemawindows» chete kuti zvimwe zvirongwa zvemahwindo hazvishande mumakotesheni »neUBUNTU» asi ubuntu haudi chero chero madhiraivha, kana antivirus »zvese izvo iwe connect uye inoshanda zvakanyanya »uye paInternet yakanyanya kukunda windows» uye kuti ini ndigare ndichitevera Windows »izvo zvinopa LINUX chengetedzo iyo Windos ichave nayo. ZVAKAITIKA!
Iyo on uye yekuvhara nguva hapana kwese padhuze neakataurwa mumusoro wenyaya,
Ndine ubuntu 10.04 yakaiswa pane laptop hp dv4 3gb Ram Intel Core2 Duo processor,
Zvinotora masekondi makumi mana kuvhura, chinhu chakanakisa ndechekuti zvinotora masekondi mana kudzima dzimwe nguva 40.
Navigation nemaforodha inokurumidza kwazvo, unogona kuva nemahwindo mazhinji akavhurika kunyangwe pamatafura mazhinji uye pc inoshanda mushe uye pasina matambudziko, desktops inogona kumisikidzwa muchimiro checube, pentagon, hexa. nezvimwewo, (zvinoenderana nematafura mangani aunosarudza) esirinda tambo kana bhora.
Kana iwe ukawana kuve nekanganiso newindo kana chirongwa (nekuda kwematambudziko nechirongwa pachacho kana nekuti maitiro acho ari kushanda zvakawandisa) mukumanikidza kuvhara (zvinova zvakafanana nekupedza mabasa mumahwindo) ichagara ichivhara hwindo pasina matambudziko uye hapana shit yekusiyana. windows uko iyo skrini inogona kuramba yakagwamba kusvikira iwe deign kudzima komputa.
Iyo ine yakanaka uye inogadziriswa graphical interface, kuve nekugona kusarudza pakati peakasiyana maficha uye mhedzisiro.
Iyo cons yandinopa kune ubuntu iri muvhidhiyo yekushambadzira, adobe flash haina kugadzirirwa nenzira kwayo mu ubuntu saka pachinzvimbo chekutumira iyo gpu kumhanyisa mavhidhiyo ayo anozviita ne processor, izvo zvinoita kana iwe uchida kumhanyisa mavhidhiyo kuzere skrini processor inoshanda zvakawandisa uye iyo gpu haina (zvinoita sekunge gpu yaparara) vhidhiyo inokiya, inobuda mukuyanana, pane zvinofungidzirwa mhinduro senge yekumhanyisa Hardware kumhanyisa kubva kuAdobe asi izvo hazvishande.
Kutsvagurudza kwakawanda kunodiwa nekuti zvinhu zvakawanda zvakagadzirwa nemawoko, kunyangwe kana akawanda masikirini akabatana, usatarisira kuti zvese zvigadziriswe chete semuma windows, unogona kukiya iyo sisitimu yese kana ukazvimisikidza kuisa zvese izvo sis. Kurudzira iwe kusimudzira.
Ini pachangu, ndakanetseka kugadzirisa nvidia nenzira kwayo (mu win vista yaive nayo nekutadza asi kana ichida kuiisa mu ubuntu inotaura kuti haigone kuwana nvidia Hardware),
kugadzirisa iyo joystick ini ndaive nematambudziko chete mu ubuntu 10.10 muna 10.04 ndinoigadzirisa ndega), kutsvaga prefect clone ye windows penda, mu ubuntu 10.10 iyo muzana yemari mubhatiri rangu haina kuoneka uye dambudziko rapfuura revhidhiyo zvizere chidzitiro.
Ubuntu isystem yakanaka kwazvo yekushanda nayo, ine akasiyana siyana mahara emahara ekurodha pasi, munzvimbo yayo yekurodha ine zviuru nekutadza uye iwe unogona kuigadziridza nekuimisa kuti iwedzere zvimwe, inokurumidza, inoita usakahadzika mirairo yaunopa iwe, yakakwana kune vadzidzi uye yekushandisa mumakhefi einternet, maraibhurari, kana makamuri emakomputa.
hapana matambudziko ekushanda kana kubhurawuza Internet.
Kana iwe uchingoda kutamba uye kuona mafirimu kana uine rimwe kana rimwe dambudziko kana chirongwa chinogona kungowanikwa mumahwindo, zviri nani kuve nechikamu chemasisitimu ese, nenzira iyi iwe unogona kutamba, kushanda uye kunakidzwa.
PS Kana mumwe munhu aigona kundibatsira ine vhidhiyo uye nvidia dambudziko, zvingave zvinobatsira kwazvo.
email yangu iri norielmtz@gmail.com
Pindura kuna Noriel
mm .. pz ndinoona kuti iyo yekupinda ia ndeyekare asi ini pachangu ndine w7 uye Ubuntu 10.04 palaptop yangu, kn yechinomwe zvinotora 1.30 min kutanga neUbuntu mumasekondi gumi nemana ndiri pa desktop uye ndakagadzirira kushanda
musiyano mudiki kwete?
Mukuwongorora kwake akapotsa akanganwa kutaura huwandu hwemavhairasi ayo Windows 7 anokunda kure nekure kurwisa Linux Ubuntu ine 0, kune rimwe divi Windows inokundawo mumari yemadhora yainoita kana ichienzaniswa neLinux iyo inodhurawo 0.
Ini handizive, handizive akadaro
Ndine vese pamba, mukadzi wangu windows7 uye ini ubuntu 10.04 lucid, pese paanoda kuita chimwe chinhu chakakomba, seakaundi mabhangi, mavhidhiyo, mapikicha nezvimwe, anotora pc yangu.
aaaaaaaaa no jodann linux (ubuntu) inoridza dhanzi kumawindo 7 uye nezvimwe iyo nyowani vhezheni 11.4 qe ini ndine izvi nekukurumidza !!! akaparadzanisa linux haigone chero hutachiona kusiyana nemawindows 7 ...... muchidimbu, ENDESS LINUX!
Ubuntu haazi mambo iyi mandriva yakanakisa zvakare inovhura runako nevamwe asi iyo gnome desktop inoita kuti ndide kurara inofinha kwazvo RUTSIGIRO KU KDE UYE KU KUBUNTU windows 7 zvakare yakanaka vazhinji vedu takadzidza kushandisa anoshanda system uye isu takatanga ne windows saka siya zvichemo mumwe semunhu haafanire kungodzidza kushandisa imwechete system use mac os futi uye solaris usanyorove ne ubuntu x icho handicho chete chinhu chiripo kana iwe ukatarisa mac aive piyona mukuva iyo desktop kunge gnome.
Mhoroi, ndaverenga zvimwe zvemashoko ako, pachangu ini ndinoshandisa ese masisitimu, Windows inotungamira maererano nekureruka kwekushandisa uye kumisikidzwa kwezvirongwa nekuti zvese zvinotevera zvinotevera uye ndizvozvo, uyezve iyo ndiyo sisitimu inoshanda neiyo zvese kana ruzhinji rwunotanga kuzivana nayo (nyaya yangu) uye kuita kuti zvese zvive nyore, pane maficha eanomwe andinoda kupfuura euyo ubuntu, sekutsvaga mafaira ari kukurumidza, zvakanaka kusvika parizvino, Asi kana zvasvika pakuchengeteka, hutachiona muUSB matanda, hutachiona hunobva paInternet hunokwanisa kuzvimisikidza pacomputer vanotanga kumisidzana zvakanyanya vachiita muzviitiko zvakawanda tumira chishandiso kutsigira kana kufonera nyanzvi, zvakanaka kuti kana avhareji vashandisi, Zvakare, antivirus inodikanwa, kunyange hazvo sekutaura kunoita posvo, dai asiri mavhairasi, windows manomwe angave akanaka, kune rimwe divi, mu linux kuiswa kweimwe chirongwa kunogona kunetsa, kunyangwe paine nharaunda izvo zvinoendererakukurumidza kukura kubva kwandakawana rubatsiro rwakawanda kusiya muchina wangu uchimhanya pa100 muzana, kana yakagadzirirwa ubuntu ndiyo yakanakisa mukuwedzera pakusununguka, ine yakanaka kwazvo interface uye inokatyamadza mhedzisiro uye haidi antivirus iyo iri kusvinura nguva dzose Nekusina antivirus iri kuongorora hard drive nguva dzese, inorebesa hupenyu hwehardware, ini ndinowana mashandisiro ekushandisa zuva nezuva uye ese emahara, ndichiwana mhedzisiro yakafanana neyekushandisa kweWindows, Ubuntu inowanzo kuve yakaoma kunzwisisa, kutarisa sarudzo dzechirongwa chakasiyana zvakasiyana kunoita kuti kuve nekupokana nekuchishandisa nekuti nharaunda nyowani, masystem ese akanaka windows anotora nguva yakati rebei kutanga mune zvemuchina wangu anenge makumi maviri. masekondi uye ubuntu 20 anenge gumi nemashanu masekondi, kana yatanga ese masystem anoshanda sekunge aive mashoma mapeji (nekukurumidza), ini ndinoda windows yekuenderana nemitambo yandinofarira uyechimiro chayo kunze kwekuti ini ndinoshandisa mapurogiramu akasarudzika kumahwindo andinoda kuti ashande (mu ubuntu anogona kuiswa asi nekuda kwezvikonzero zviri pachena senge windows vachashanda zvirinani mumawindows), ubuntu ini ndinoda kuchengetedzeka, ndeye mahara uye kunze kwekunge ini ndiri kubhurawuza ndinogona kuwana chero kwandinoda pasina njodzi yekumisikidza script iyo inotanga kuita maitiro pasi pemvura, ese ari maviri akanaka mashandiro masisitimu akavandudza zvakanyanya nekufamba kwenguva uye pasina kupokana vacharamba vachidaro , inyaya yekuziva mashandisiro ayo.
Kana isu tikamometa PC uye nekuisa Windows 7 tinogona kuva nemanzwiro akanaka ekutanga, hapana anozviramba. Dambudziko riri mushure memwedzi mitanhatu yekushandisa kwazvino, inova inorema uye inorema, kudzamara isingatsungirike uye wopedzisira wave kuda kuita fomati zvakare.
Asi nekuchengetedza kwakanaka (kubvisa mafaira asina basa, kupaza diski, kutarisa zvikanganiso mukati maro) uye yakanaka antivirus uye firewall (chinova chinhu chakaipa nezve windows) iyo PC inogara kwenguva yakareba mune yakanaka mamiriro. Ndakaita izvozvo, ndine windows 7 yakaiswa rinopfuura gore rapfuura uye inoshanda chaizvo.
Pindura kune sapoQLCTM
Delete zvisina basa mafaera ?? Tarisa zvikanganiso ??? WTF ??? Nyarara Linux, iwe shit yenguruve, iyo antivirus (kana iwe uchiziva kusarudza yakanaka) inenge isingatore zviwanikwa, uye chinhu chega chakakosha kudzora diski, iyo isingagare chero chinhu, uye zviri pachena kuti komputa inoda kuchengetwa, saka kuti kugadzirisa nenzira ndiyo chete chinhu, ndiko kuzvidzora.
Zvakanaka, Windows Boy akataura, achiombera. Bill gedhi rine chokwadi chekukupa iwe mubairo nekuda kwazvo. Bravo!
fanboy mune zvese zvinokwana, rega ndikutaurire kuti windows inounganidza yakawanda "junk" iyo ingave yakaputswa mafaera, zvenguva pfupi mafaera etc. Zvakare zvikanganiso uye zvisina basa mafaera, ccleaner chishandiso chakakura kugadzirisa aya matambudziko..chimwe chinhu chinoshoresa chiri CHINYANYA nekuti mushure memwedzi ingangoita 4-6 inononoka kunonoka .. iwe unodawo antivirus yakanaka (ini ndinokurudzira Norton 360 asi Kana iwe ndinoda yemahara, yakanakisa ndeye avast) Ndine windows 7 yekupedzisira 64bits uye ubuntu 12.04 64bits pamushini mumwe chete saka ndinoziva zvandiri kutaura kana ndichikuudza kuti linux inokurumidza, yakagadzikana uye zvakare haufanire defragment, haina kuzadza nemafaira marara ayo ayo anozomhanya nekukurumidza nguva dzose, kwete nekuda kwechikonzero icho chiri chisina kutaurwa chakanakisa chero S, O, iri,
Tarisa, uri murume benzi ... kuti antivirus haidye zviwanikwa? kuti iwe chete unofanirwa kuzvidzivirira kuchengetedza komputa? Ndapedza makore mashanu ndichidzidza nzombe kukoreji ipapo ... Ndozvazvinoita nezvazvo mafungiro ...
Raymundo Mariona akadaro
Ndakaseka zvangu nechemumoyo. Ne linuxMINT ini handifanire kudzikisira dhiraivha, kana kuisa antivirus (nematambudziko ayo anotora ekuvandudza nhengo gore negore), kupfuura zvese ndinovhura maemail eshamwari dzangu dzese ndisingatyi mavhairasi andinogona kushandisa chero USB dhiraivhu yatove Kunyangwe iri mu hfs fomati yemac, ntfs yemahwindo kana mafuta 32. Chero ani anotenga rezinesi reGuindows imo nekuti haana kana chakanaka chekuita nehupenyu hwake, kunze kwekufunganya nezvemaGavusi mavairasi matsva uye kudzikisira dhisiki rake nguva nenguva.
Pindura kuna Raymundo Mariona
Iyo Linux system pachayo inotyisa, asi iwo mapurogiramu uye anovandudza anoyamwa nekuti mushure memwedzi mitanhatu panogara paine chimwe chinhu chinomira kushanda zvakanaka.
Pindura kuna amdr
Luis Munoz Martel akadaro
JAJAJAJAJAJAJ Vashandisi veLinux vanoita senge vaparidzi veevhangeri. Ivo havana kusiya basa kuti vasave vasina kukosha muzana yevashandisi. Microsoft haitooni kunyange Linux semukwikwidzi, nekuti kukwikwidza kwayo kwakakomba iApple.Ndiani achazoda kunyora mirairo pane 80's -style koni?
Pindura kuna Luis Muñoz Martel
Juniors Calderon akadaro
Gadziridza iwe unofanirwa ^ _ ^
Pindura Juniors Calderon
Sir Juno akadaro
Oo chii chakashata
Pindura kuna Sir Juno
Zvakanaka, muchidimbu uri kutaura chokwadi, asi vazhinji vedu tinofarira kushandisa mirairo, ini ndinoshandisa windows uye linux, ini handigunun'uni nezve chero, sekutaura kwambotaurwa, yega yega inoshandira zvido zveumwe neumwe, semuenzaniso ini ndiri graphic dhizaini uye ini ndoda windows dhizaini software, handikwanise kumhanyisa dhizaini kana illustrator pane linux, kunyangwe neWine sezvo zvakawanda zvipembenene zvakagadzirwa uye ngatirege kana kumbotaura nezveCinema 4d, ndinoshandisa linux kuronga uye kubata multimedia mafaera, ini ndinoda maSystem maviri akanaka kwazvo, imwe iine kuenderana kwesoftware uye imwe nekuchengeteka kwayo maererano nehutachiona uye maitiro, chimwe chinhu chandinoda, ipfungwa yangu, ini handizive nezvako, kwaziso!
Pindura kuna Amr
Nemashoko ako pa 'typing Command muConsole' iwe unoratidza yako isina zivo ruzivo rweLinux. Parizvino, zvakawandisa zveLinux zvinoshanda zvakafanana nechero Windows, ndinoreva, hazvina kufanana… sezvo Linux iri 100% yakachengeteka uye isina hutachiona uye Windows isiri.
Nenzira, chinyorwa ichi chinobva muna2009 uye ndicho chinonyanya kutaurwa nezvacho.
Sekureva kwaIxa, chete nekusabvumirana kwekuti Linux haina 100% yakachengeteka, pane makumi matatu kusvika makumi mashanu mavhairasi anozivikanwa echirongwa ichi.
gus malav akadaro
Kune Linux pane makumi matatu kusvika makumi mashanu mavhairasi (ichokwadi), asi Windows ine zviuru uye inokuvadza zvekuti inogona kuparadza komputa yako
Pindura kune gus malav
Chokwadi. Asi nekuda kwechikonzero icho hazvigone kutaurwa chokwadi che100%.
Pindura kune antxon
Pamusoro pezvo, matambudziko ehutachiona muLinux anotorwa nekukurumidza uye nekubudirira kupfuura Windows. Sezvo paine Malware ye, iti, Ubuntu, inogadziridzwa inotangwa mumaminetsi mashoma kugadzirisa dambudziko uye munhu wese anofara. Microsoft inotora Mazuva, Mavhiki, Mwedzi uye kunyangwe makore kugadzirisa ayo maBugs.
Ndiko nekuti mune yemahara software chero munhu anogona kubatsira nematambudziko;)
Iyo ndeyekuti Windows yakafa yakaiswa mumakomputa ekutengesa, kuti ive yemahara.
Kwete shamwari, haina mahara. Paunotenga komputa, urikubhadharira iyo sisitimu yekushandisa iyo yakatangwa-kuiswa (Windows). Edza kuenzanisa mitengo nekombuta iyo ine Linux pre-yakaiswa, iwe uchaona mutsauko!
linuxadictos, kuSpain ndezvipi zvitoro zvemhando yepamusoro (fnac, media markt ...) kutengesa pc neiyo Linux inoshanda system (ini handina basa kana iri ubuntu, mint, kana chero chii)?
Pindura kuna Aleix
Mhoro Aleix, zvinosuwisa muzvitoro zvikuru ndinotya kuti hazvigoneke, nekuti ivo vanongotengesa maPC neWindows pre-yakaiswa (uye iwe unotozvibhadharira paunotenga komputa, hongu).
Asi muzvitoro zvidiki (kana mafranchise) - senge muPCBOX, pakati pevamwe- unogona kutenga komputa neLinux pre-yakaiswa. Uye izvo zvinoonekwa zvakanyanya mumutengo wekupedzisira wemidziyo yaunotenga.
DC Bike akadaro
Nehurombo ndakaisa Ubuntu 12 uye kunyangwe dai ndaikwanisa kuisa XAMPP kuti ndiishandise seWebhu server, iyo system kazhinji haina kushanda, chero Firefox kana Chrome yaigona kuvhura tsamba yangu mu hotmail, yangu "Timeline" yekugadzirisa haina kuitwa pa Facebook, hazvigoneke kupinda muGoogle Drive uye nePC "kunonoka kwazvo" uye kupedzisa kuvhura gwaro muLibre Office kwekusingaperi…. Imwe nguva yapfuura ndaive neSuse 10 uye yaive yakawanda kana kushomeka ... asi ndinofanira kudzokera kuWindows 7 ... hapana nzira, iyi distro haina kungondishandira uye ndanyadziswa.
Pindura DC DC
Ini ndinofunga Ubuntu 12 yakundikana kuisa Kubatana, iwe unofanirwa kuisa imwe hunhu hwePC yako kuti uve neakawanda kana mashoma zano.
Ehe, ndinoziva, Linux marara kungofanana nevazhinji vanhu vanoishandisa ;-), haufanirwe kunge wakamboedza
Taura zvako hama. Ndiri kufara neLinux uye ndinoita zvinhu zvakawanda zvirinani pane zvandakaita muWindows. Iko hakuna OS iri nani kupfuura imwe, ingori iyo inokodzera zvaunoda. Ini ndichiri kushandisa windows mumuchina chaiwo nekuti ini ndoda kuronga mu visalbasic.net.
Sechokwadi chinonakidza, mawebhusaiti mazhinji ari paLinux, iyo yaunoti shit.
Mhoroi, ndinoda kushandisa Ubuntu. Ini ndinogara ndiri Windows mushandisi uye pane dzimwe nguva ini ndakaisa imwe Linux kubva kwakasiyana distros, asi ini ndanga ndine matambudziko kubvira zvinhu zvandakadzora, senge mafirimu, akateedzana, nezvimwe Ini handisi veçian uye chokwadi ini ndaneta neWindows, iwe unokurudzira chii?
Jony ndinokurudzira iwe Mac xDDD
Zvakanaka, ndanga ndichishandisa Linux, kwemakore mazhinji, ndagara ndiri mushandisi weLinux uye zvakare, iri sisitimu inoshanda yandaida zvakadzama, asi nguva pfupi yadarika kwandiri, yakanga yasiya yakawanda yekuda uye mwedzi 1 yapfuura yakandipa kuti ndidzokere kumahwindo, kunyanya windows 7 negehena, ndinotya kuti ndapedza nguva yakawanda, nekuti izvozvi ndaona kuti mazhinji emapurogiramu epachena andinawo mumahwindo uye kwandiri zvinoshamisa zvishoma pane linux, mune kesi yemaharaoffice. Asi hei, kunyangwe zvakadaro ini ndichiri kuda linux, kunyangwe kwechinguvana mamiriro ezvinhu zvinhu, ini ndinoramba zvachose kudzokera kumashure.
Zvakanaka, linux mwana ari kukura saka zvakandishamisa zvakanyanya.Ini ndiri programmer kune ese windows uye linux uye ndinoda kukuudza iwe kuti compiler inonzi gambas inogadzira zvirongwa zve linux yakafanana ne visual basic inoipfuura iyo! Ini ndanga ndagadzira yangu yekutanga system mumutauro weGambas QT uye GTK mbatatisi ine mugadziri uye zvese kuitira kuti vazive ini handichinje kune linux yechinhu chero chipi zvacho uye zvishoma kuKDE saka windows uye mac zvinochengeta.
Cheloki Peña Z akadaro
hapana shamwari linux ihanzvadzi yemac yakafanana… .saka ivo vasingakwanise kuregedzana
Pindura kuna Cheloki Peña Z
Chokwadi ndechekuti bvunzo dzakatonyanya ... zvandinofanira kutaura ndezvekuti ini ndinosarudza kuramba ndichishanda ka1000 neUbuntu uye kwete kuzviisa pasi paWindows iyo yandinoshandisa chete mune chaiwo kesi.
Jefferson Palacios akadaro
haha, murume, zorora, linux mint yakavakirwa pane ubuntu ,;)
Pindura kuna Jefferson Palacios
kungo tamba xD
kusvikira steam ichishanda zvirinani kune linux
Ndanga ndichishandisa Linux kwenguva pfupi, haina kumbotora nguva, yekutanga Ubuntu yandakaisa yaive 10.04 panguva iyoyo, saka ndakashamisika, ndikazoedza kubuntu uye handina kuifarira zvachose, ndakadzokera ku Ubuntu asi ikozvino iine 10.10 uye ini ndaive nemazana ematambudziko, ini ndiri parizvino paLinux Mint 13 sinamoni, uye inomhanya chaizvo asi haisi Ubuntu ...
Linux Mint yakavakirwa paUbuntu.
Kunze kwekunge iri iyo LMDE (Linux Mint Debian Edition) ipapo yaizove yakavakirwa paDebian, asi sezvo Ubuntu yakavakirwa paDebian ^ _ ^
Vese vatatu vanotonhorera !!!
Ubunto 12.4 lts Vs Windows 7 zvese zvichangobva kuiswa pasina chero chinhu ... Ubunto inotora zvachose kuvhura windows, nekukurumidza windows ... kuisirwa kwekugadzirisa uye zvimwe zvinhu Ubunto Ndinoziva zvinoita kunge murume mukuru achifunga ... Windows nekukurumidza .. .: Mini laptop Hp compaq CQ10-420 iyo hombe yekukunda Windows 7… yemahara inodhura.
Pindura kuna Sargom
Hapana chandinoshanda nehuremu hwemifananidzo, kuona, kupa, vhidhiyo, 3d uye ubuntu iri 200% nekukurumidza kupfuura windows 7 64 mabiti kubva kufekitori pane yekufunga, yakakosha i5, 8 gb yehypx ram, uye solid state drive. kusataura nezve internet, kugadzirisa uye bhuti
Ndakaedza yega yega sisitimu yekushandisa kunze uko! ese windows, senge mac, linux mune ayo ese distros (ubuntu, Xubuntu, knoppix pakati pemamirioni aripo) uye ini ndinogona kutaura kuti kusiya hutachiona Ubuntu anokunda, nekuti yemifananidzo inobvunza chimwe chinhu chingati mapenzi mundangariro uye zvese, nepo windows kana ichikumbira zvakawanda uye ichida kupfuura 10gb yekumisikidzwa kweOS, ubuntu huri nani uye zvakandibhadharira zvakawanda kupedzisa kuyedza ese ma distros, asi ubuntu hwandisiya ndakashamisika neiyo Quantal Quetzal 12.10, mushure me9.10 Karmic Koala, ndiyo yakanakisa kana pasina kupokana nhasi kana yakanakisa distro 12.10, ubuntu yakanakisa. Mahwindo haapo!
Fco Chz akadaro
Chinyorwa chakanakisa, ini ndinoshandisa Ubuntu 11.10 muchimiro chayo chakanakisa uye inomhanya zvikuru, ndinochida uye sezvo ini pachokwadi ndisina kuronga kudzokera kune inotsamwisa Windows Inoshanda Sisitimu, uyu baba baba Windows handirambe, asi nezvikanganiso zvinouraya. (Bhuruu skrini), nerd! uye kwete!.
Pindura Fco. Chz
hahaha kwete nekuti linux inogona kusvika nzira yako, tumira windows yatove ok echo inoda kushuwira qe windowsx biola kodzero dzako. encanbio linux ine zvinhu zvakawanda kupfuura mawindoxs, pamusoro pekukudzivirira kubva ku viruz
Iwe murume, nyatsoteerera kubhawa tsvuku iyo inoonekwa pasi pezwi rimwe nerimwe raunokanganisa. Zvinorwadza kukuverenga.
Usati wadzidza mashandisiro ekushandisa masystem kana kutaura pane chero chinhu, dzidza kunyora, ndapota.
Ini ndichangobva kuisa ubuntu 12.10 uye ndiyo inononoka pasi rose, kungovhura hwindo kwakanditorera ingaita masekondi gumi, uye rinonamira, handizive kuti sei vachiti ubuntu huri nani kukunda, pamwe kune vanhu vane hunyanzvi, asi kuvanhu vakajairika ubuntu ndiyo yakaipa, pamwe ini handitsigire uye ndatoibvisa, ichine nzira refu yekuenda kukunda Microsoft
Pindura kuna anoni
Shamwari usapa mhosva Linux neruzivo rwako rwusina maturo. Linux iri pamusoro peMicrosoft, zvinotuka kuti kunyangwe Microsoft yakagadzira antivirus. Pane chero munhu akambonzwa nezveUbuntu AV Kuchengetedzwa? Kana Windows iri inotonhorera chaizvo, sei isinga ziviswe kuva OS yakachengeteka uye yakavimbika pasi rese? Kunyange ivo vanogona kunyepa zvakanyanya ...
Bvisa Kubatana uye isa sinamoni.
ubuntu zvirinani kupfuura windows 7
Anonimus 2832 # akadaro
Yangu system haina kubva pamabhinari, yakaita kuti nyika ishanduke .... isu hatikanganwe, hatikanganwire, timirire isu
Pindura Anonimus 2832 #
Sezvo Ubuntu inotora pakati pe68 ne73 kuvhura, ini ndaive neUbuntu hwangu hwakatora masekondi makumi maviri kusvika makumi maviri nemashanu kuti ivhure uye masekondi mana chete kudzima, hongu nemitsetse mazana maviri
Semaonero angu, ndinofunga kuti dai windows anga akanyatsochengetedzeka uye microsoft ikatora nguva shoma kugadzirisa zvipembenene musystem yako, mavhairasi angadai asipo uye nenzira iyi sisitimu yaizogara kwenguva yakareba uye ichimhanya nekukurumidza, nekuti zvaisazoda antivirus zvinova zvinoita kuti zvitore nguva yakati rebei kuita pane Ubuntu.
Rimwe zuva tichafa uye Windows ichaenderera iine 90% yemusika wevashandisi vashandisi, uye izvo hazvife zvakashandurwa ne linuxeros
Kunyanya ndeye kungofarirwa. Kunze kwezvo, hapana anoedza kuchinja chero chinhu. Zvakafanana nechitendero, munhu wese anopupura zvavanoda uye anoenderana nenzira yako yekufunga uye hapana munhu anofanirwa kushandura pfungwa yako, chete nekutenda kwako. Izvi zvinoitikawo neOS, yega yega inoshandisa inoenderana zvakanyanya nezvavanoda, asi sechitendero, chokwadi chekuti OS inonyanya kufarirwa hachisi chiratidzo chekuti ndiyo yakanakisa.
Windows yakanakira vanhu vanofarira kushandisa antivirus kunonoka pakombuta yavo, uye kuongorora kukuvara kwehutachiona, kugadzirisa, uye zvese izvo.
Kana iwe uchida izvo ivo havakupe iwe chero software kana kuti uitarise iyo pirated kuti ive nzira yekutiza kubva pamutemo, saka Windoze ari nani.
Kana iwe uchida nyika ine mamonokopu uye ese ehunyanzvi simba uye mari kuti iiswe mukambani imwechete uye nevanhu vashoma, saka Windos iri nani.
Kana iwe watove wakadzidza kushandisa windows uye uri gwai nekuti haufarire kuchinjira kune chimwe chinhu chiri nani, saka Windows iri nani kwauri.
windows 7 vs XP = ne XP mashandiro
windows 8 vs Ubuntu 12.04 = neUbuntu hipsters
Pindura ku bond
Yakawanda sei dhongi rakasununguka, mawindo akawanda kwazvo jongwe, zvikwata zvakakura zvemakomputa zvine akati wandei OS yakaiswa uye kuti chero munhu anouya kuzotengesa kuwindo seyakanakisa kuti vazvizivise zvishoma, kuti pane zvakawanda zvakagadzirira pasina zvidzidzo zvekutaura kuravira kwemuromo, siya maFree-to-use masisitimu kune avo vanovanzwisisa voenda kunoyamwa jongwe raBill.
carlos ferra akadaro
ita bvunzo neLinux Mint 16. uye nemichina ine OS ine nguva yakaiswa .. uye ita bvunzo dzekubhurawuza internet ... Zvino ngatitaurei nezvekurohwa .. hahaha
Pindura Carlos Ferra
DIEGO LOPEZ TORRES akadaro
Ndinochinja sei kubva kuUbuntu kuenda kuWindows?
Pindura kuna DIEGO LOPEZ TORRES
Firefox inosanganisirwa muWindows 7 Unofanira kubvuma here?
Yakasarudzika hurukuro na Steve Ballmer